လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွသောလိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်နှစ်မျိုးမတူသောအမျိုးသားများကြားလိင်စိတ်ကွဲပြားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် Maladaptive Cognitions ၏အခန်းကဏ္ (
Highly လိင် Active ကိုဂေးများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား (2014) ကြားတွင် Hypersexuality အတွက် Maladaptive သိမြင်မှု၏အခန်းက္ပ
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2014 မေလ; 43 (4): 669-683 ။
2014 ဖေဖော်ဝါရီ 21 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1007 / s10508-014-0261-y က
ဂျွန်အီး Pachankis,1,2 အိပ်ချ် Jonathon Rendina,2,3 ana Ventuneac,2 ခရစ်ယာန် Grov,2,4,5 နှင့် ဂျက်ဖရီတီ Parsons2,3,5,6,7
လိင်အကြောင်းကိုသိမှုစိစစ်ရေး hypersexuality များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ကုသမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ရှိ hypersexuality ၏အယူအဆရေးရာမော်ဒယ်များအတွက်ကိုယ်စားပြုကြသည်မဟုတ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သလိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်မှုတစ်ခုတိုင်းတာအတည်ပြုခြင်းနှင့် hypersexuality ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်၎င်း၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ 60 အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်ပစ္စည်းများရိုးရိုးယောက်ျားနှင့်ကျွမ်းကျင်သူပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့လေယာဉ်မှူးနမူနာနှင့်အတူအရည်အသွေးအင်တာဗျူးများလိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်မှုနှင့် ပတ်သက်. 17 ပစ္စည်းများကိုတစ်ရေကူးကန်လြှော့။ 202 အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားတစ်ဦးကိုသီးခြားနမူနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, Impulse, စိတ်ခံစားမှု dysregulation, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အစီအမံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, အများကအဆိုပြုထားသည့် Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory ပြီးစီး အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးရဲ့ DSM-5 လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders အပေါ် Workgroup (2010)။ ရိပ်မိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ထိရောက်မှု: factor ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံး subscales ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်ရလဒ်များကိုပြဿနာ hypersexuality ဟောကိန်းထုတ်အားလုံးသော, လိင်များ၏လိုအပ်ချက်ခြီးမှမျးသနှင့်လိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟောကိန်းထုတ်လျော့ချ Self-ထိရောက်မှု disqualifying မထွက်ရ hypersexuality တစ်သိမြင်မော်ဒယ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိကြ၏။ multivariate Logistic ဆုတ်ယုတ်မှာတော့လိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများ disqualifying ပင် hypersexuality အပေါ်တည်ဆဲသုတေသန၏အဓိကဆောက်လုပ်ရေး, AOR = 1.78, 95% CI 1.02, 3.10 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုများအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်, hypersexuality အတွက်ထူးခြားတဲ့ကှဲလှဲခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်များပိုမိုကောင်းမွန်နားလည်မှု hypersexuality နှင့်လိင်နှင့်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်တဦးတည်းရဲ့စွမ်းရည်များ၏ရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. သပ္ပါယ် Appraiser အားပေးကြောင်းကုသမှုချဉ်းကပ်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အရေးပါမှုတစ်ခုသိမြင်ချဉ်းကပ်၏ utility ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
keywords: hypersexuality, maladaptive သိမြင်မှု, လိင်တူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား, စိတ်ကျန်းမာရေး
ပြဿနာ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်, မှုများထပ်တလဲလဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုလက်တွေ့ syndrome ရောဂါဖြစ်ပါတယ်တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူတွေနှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (Kafka, 2010) ။ နားလည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပြဿနာ hypersexuality ကုသယင်း၏ key ကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောကုသမှုပစ်မှတ်၏မှတ်ပုံတင်လိုအပ်နေဆဲ။ ပြဿနာ hypersexuality ၏တည်ဆဲအယူအဆရေးရာနားလည်မှု (compulsive, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အမူအကျင့်ပိုလျှံ၏စွဲမော်ဒယ်များအပေါ်ဆွဲKafka, 2010; Kingston & Firestone, 2008) ။ ဒီစာပေများတွင်တစ်ဦးကမှတ်သားလောက်ကွာဟမှုကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဖွဲ့စည်းကြောင်းတစ်ဦးချင်းရဲ့အ rigidly တဖက်သတ်သို့မဟုတ် Non-functional ဖြစ်စေသဘောထားတွေ, ယုံကြည်မှုများနှင့်လိင်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်များ, နှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်များရဲ့အနှစ်သာရကလျက်ရှိသောသူတို့ကိုအတှေးဆိုလိုသောလိင်နှင့် ပတ်သက်. maladaptive သိမြင်မှု, ပါဝင်သည်။
maladaptive သိမြင်တဲ့ key ကို etiology နားလည်သဘောပေါက်အတွက်အခန်းကဏ္ဍ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် hypersexuality နှင့်အတူပါဆုံး comorbid ရှိသူများအပါအဝင်အများအပြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း, (များ၏ကုသမှု play ပေမယ့်ရေမွန်, Coleman, & Miner, 2003), ပြဿနာ hypersexuality ထိုသို့သောသိမြင်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုစူးစမ်းခံရဖို့မရှိသေးပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါနှင့် dysthymia ကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းအတွက် Maladaptive သိမြင်မှု, (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1987), လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် (Clark က & ဝဲလ်, 1995), ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ (ရေတွင်းများ, 1999), ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (Witkiewitz & Marlatt, 2004), နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအပါအဝင်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်, (Sharpe & Tarrier, 1993) နှင့် kleptomania (Kohn, 2006), (တိအခြေအနေများ၏အဓိပ္ပါယ်ကို၏စိစစ်ရေး, တဦးတည်းရဲ့အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များ, ဒါမှမဟုတ်ဘဝခွအေနမြေားသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်တရဲ့စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြရန်Beck et al ။ , 1987) ။ ဥပမာ (ဤသည်အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း၏သိမြင်မှုမော်ဒယ်များအပေါ်ဆွဲ, Sharpe & Tarrier, 1993), ကျနော်တို့လိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်ဥပမာ, အဓိပ္ပာယ်ကိုသို့မဟုတ်လိင်၏ရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်တရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျခန့်မှန်းချက်ဆံ့အံ့သောငှါတွေးဆ။
ကျနော်တို့ပြဿနာ hypersexuality ၏တည်ဆဲအယူအဆရေးရာမော်ဒယ်များပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဤမော်ဒယ်များလက်ရှိအတိအလင်းသူတို့မည်သို့ပင်ဆိုစေအဆိုပါ etiology, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် hypersexuality ကုသနားလည်သိမြင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍခွင့်ပြုပါ, maladaptive သိမြင်ရည်ညွန်းပါဘူးစဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ hypersexuality ၏ဥပမာအားဖြင့်, compulsive မော်ဒယ်များ (Coleman, 1987, 1990) minimize သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ, ခြိမ်းခြောက်ရှောင်ရှားရန်လိင်၏အသုံးပြုမှုကိုအလေးပေး။ ဒီ model အတွက်သက်ဆိုင်ရာသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုဖြေရှင်းရန်, ဥပမာ) လိင်များ၏ရိပ်မိလိုအပ်ချက်များ၏ဘက်လိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ချဲ့ပါဝင်သည်ပေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းထံမှပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအထိပြဿနာအပြုအမူတွေ၏ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မော်ဒယ်များ, ဆုလာဘ်အရွယ်အစားတဖက်သတ်သဘောထားအမြင်ကိုအသိအမှတ်မပြုပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဆုချခြင်း, ထကြွလွယ်သောအပြုအမူကားမောင်းအဖြစ်နှောင့်နှေးဆုချ (Sharpe & Tarrier, 1993; Witkiewitz & Marlatt, 2004) ။ ပြဿနာ hypersexuality ၏ Impulse ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ်များ (ဥပမာ, ရေမွန် et al ။ , 2003), ထို့ကြောင့်လည်း Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအန္တရာယ်များ၏ဘက်လိုက်သဘောထားအမြင်များကကစားအခန်းကဏ္ဍကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှအကျိုးမယ် (Logue, 1988; Mischel & Baker, 1975) ။ hypersexuality ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမော်ဒယ်များ (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Kingston & Firestone, 2008), ဥပမာ (ထိုကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှု-ကိုဆွဲထုတ်ဖြစ်ရပ်များ၏ biased အဓိပ္ပာယ်ကိုစိစစ်ရေးအဖြစ် maladaptive သိမြင်မှု, အဘို့ခွင့်ပြု Joormann & Siemer, 2011) ။ hypersexuality ၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့စွဲမော်ဒယ်များ (Carnes, 1983; Goodman, 1997), ပြဿနာ hypersexuality, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုတိုးပွားလာအလွဲသုံးစားလုပ်ကိုယ်စားပြုလိင်, Self-စည်းမျဉ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအစေခံရန်လိင်များ၏စွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်. တိယုံကြည်ချက်, ဒါမှမဟုတ်တဦးတည်း၏အထင်လွဲမှားမှုများ၏အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်. သိမြင်ဘက်လိုက်မှုအဘို့ခွင့်ပြုနိုင်သည့်အတွက် မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း။
ပြဿနာ hypersexuality များအတွက်လက်ရှိကုသမှုချဉ်းကပ်အဓိကအားအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် 12-Step (ဥပမာ, ကိုအာရုံစိုက်နေချိန်တွင် Carnes, 1983; Pincu, 1989), ဆေး (ဥပမာ, Kafka & Prentky, 1992) နှင့်အမူအကျင့်ချဉ်းကပ်မှု (ဥပမာ, ရွှေ & Heffner, 1998), အနည်းငယ်အပိုဆောင်းချဉ်းကပ် hypersexual အပြုအမူကိုလျှော့ချဖို့လမ်းကြောင်း en maladaptive သိမြင်ပစ်မှတ်ထား၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုလုပ်ပါ။ သိမြင်မှုအာရုံစိုက်ကုသမှုအကြံပြုချက်များကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများနှင့်လက်တွေ့လမ်းညွှန်မှုထက် randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေကနေရပ်တသော်လည်း, သူတို့သည်အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အယူအဆရေးရာမော်ဒယ်များအတွက် maladaptive သိမြင်မှု၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများနှင့် hypersexuality ကုသမှုအတွက်လက်တွေ့လမ်းညွှန်မှုကုထုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းကျွမ်းကျင်မှု (ဥပမာတိုးမြှင့်အတူ, လိင်နှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်တဦးတည်းရဲ့စွမ်းရည်အထင်သေး၏လိုအပ်ချက်ပိုမိုမှန်းဆပြီးဖြေရှင်းဆွေးနွေးရန် သိုးထိန်း 2010; Weiss, 2004) ။ ဤအသတ်သတ်မှတ်မှတ်လိင်-related တဖက်သတ် Appraiser လျှော့ချပေါ်မှာဤအာရုံ (စ hypersexuality ထက်အခြားပြဿနာလိင်များအတွက်ထူထောင်ကုသမှုချဉ်းကပ်မှု (ဥပမာ exhibitionism, fetishism) နဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Murphy & စာမျက်နှာ, 2008; Wincze, 2000).
ပြဿနာ hypersexuality စုဆောင်းခြင်း (၏သဘောသဘာဝနှင့်အကဲဖြတ်နှင့် ပတ်သက်. သုတေသနအဖြစ်Kafka, 2010), အားဖြင့်ဒီ syndrome ရောဂါများအတွက်ကုသမှုချဉ်းကပ်မှု၏ပြန့်ပွားအားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ် maladaptive သိမြင်မှု၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအပါအဝင်ယင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ကုသမှုအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအကြောင်းအချက်များ, သိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာလိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်ခြင်းဖြင့်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဖွဲ့စည်းကြောင်းတစ်ဦးချင်းရဲ့လက်ရှိသဘောထားတွေ, ယုံကြည်မှုများနှင့်လိင်၎င်း၏အခင်းအကျင်း, အဓိပ္ပါယ်များနှင့်အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်များရဲ့အနှစ်သာရကလျက်ရှိသောသူတို့ကို rigidly တဖက်သတ်သို့မဟုတ် maladaptive အတွေးများကိုဆိုလိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Construction ထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုမှု, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, (ဥပမာဖြတ်ပြီး maladaptive သိမြင်မှု၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ aligned သည် Beck et al ။ , 1987) ။ maladaptive သိမြင်မှု၏ဤအဓိပ်ပါယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, ရုပ်ပုံများ, ဒါမှမဟုတ်အတွေးကျူးကျော်ဝင်ရောက်မပါဝင်ပါဘူး။ hypersexuality ၏တည်ဆဲအယူအဆရေးရာမော်ဒယ်များအစားအစားစံသိမြင်-based ကုသမှုချဉ်းကပ်ဖို့အာမင်ဖြစ်ကြောင်း hypersexuality ထိန်းသိမ်းခြင်းသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များထက် antecedent လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကဤဖြစ်ရပ်များ conceptualize ။
ပြဿနာ hypersexuality ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးလူနည်းစုဖိအားအပါအဝင်ဤအုပျစုအကြားဤပြဿနာကိုကားမောင်းသည့်ထူးခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ, (ပေးသောလိင်တူချစ်သူတွေအတွက်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်ရိုးရိုးနှင့်အခြား MSMParsons, Grov, & Golub, 2012; Parsons et al ။ , 2008) နှင့်ပြဿနာ hypersexuality နှင့် HIV အန္တရာယ်ကြားကဆက်ဆံရေး (Dodge et al ။ , 2008; Grov, Parsons, & Bimbi, 2010) ။ လိင်ကွဲယောက်ျား (နှိုင်းယှဉ် hypersexuality နှင့်အတူအချိုးအစားမညီမျှမှုပြဿနာများကြုံနေရအပြင်Baum & Fishman, 1994; Missildine, Feldstein, Punzalan, & Parsons, 2005), လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင် hypersexuality နှင့် maladaptive သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသသည်အခြားအချက်များ၏မြင့်မားသောနှုန်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်Purcell et al ။ , 2007) နှင့်လူမှုရေးစိတ်စွန်းကွက်နှင့်အမည်းစက်နှင့်ဆက်စပ်သောဖိအား (Muench & Parsons, 2004; Pincu, 1989) ။ ဤရွေ့ကားဖိအားအန္တရာယ်များများ၏ညှိနှိုင်းပြွတ်ဖွဲ့စည်းရန်, ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာ hypersexuality အဖြစ်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းသို့မဟုတ် syndemic, ထိုတစ်ပြိုင်နက် (တစ်ဦးချင်းစီ၏ဤအုပ်စုတစ်စု၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်Parsons et al ။ , 2012; et al တင်းကုပ်။ , 2003) ။ ထို့ကြောင့်ဤကျန်းမာရေးအန္တရာယ်မဆိုတဦးတည်း၏ကု သ. အစိတ်အပိုင်းများ၏မှတ်ပုံတင်ဒီလူဦးရေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များများ၏ကျန်းမာရေး-depleting အဆငျ့ဆငျ့နှောင့်အယှက်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။
လိင်နှင့် ပတ်သက်. maladaptive သိမြင်မှုပြဿနာ hypersexuality များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်မူလတန်းအခန်းကဏ္ဍသိမ်းပိုက်ကျနော်တို့ကဒီဆောက်လုပ်ရေးရိုက်ကူးရန်အတွက်ခိုင်လုံသောအတိုင်းအတာကိုဖန်တီးရန်ရှာသော့ချက်များအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက် hypersexuality အတွက်ယခင်က unexplored, ထူးခြားတဲ့ကှဲလှဲကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်သောယူဆချက်အပေါ်အခြေခံပြီး hypersexuality ၏ဆက်စပ်မှုယနေ့အထိသုတေသနအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပြဿနာ hypersexuality ခန့်မှန်းအတွက်လိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့ဤပထမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကဤအခွအေနေတချို့လက်ရှိကုသမှုချဉ်းကပ်လိင်အကြောင်းကိုသိမှု၏အလားအလာအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍဖြေရှင်းရန်ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်အမှတ်တမဲ့ထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းသိမြင်အားပေးအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားမြင့်မားသောဦးစားပေးသုတေသနလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်မှာကိုယ်စားပြုတယ် hypersexuality (တဦးတည်းကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်မကြောင်းဥပမာဟူသောယုံကြည်ချက်) ။ လိင်နှင့် ပတ်သက်. maladaptive သိမြင်မှုတစ်ခု psychometrically သံကိုအတိုင်းအရှည်ဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြဿနာ hypersexuality အတွက်ထူးခြားတဲ့နှင့်ယခင်က unexplained ကှဲလှဲကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဆန်းစစ်အသုံးပြုပုံကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာသည် ပို. ပြည့်စုံရုပ်ပုံတိုးနှင့်များစွာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြနေတဲ့ဝတ္ထုကုသမှုပစ်မှတ်ကမ်းလှမ်းရန်မျှော်လင့် ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း။
1 ရည်ရွယ်ပါသည်။ လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ maladaptive သိမြင်တဲ့အတိုင်းအတာထဲမှာပါဝင်ဘို့ပစ္စည်းများ Generate ။
2 ရည်ရွယ်ပါသည်။ အချက်တွေကို၏အချက်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ထောင်ရန်, discrete subscales ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်, subscales တို့တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်။
3 ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယခင်သုတေသနအတွက်ထူထောင်ခဲ့ကြကြောင်း key ကိုခန့်မှန်းဘို့ချိန်ညှိပြဿနာ hypersexuality အတွက်ထူးခြားတဲ့ကှဲလှဲကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ sex အကြောင်း maladaptive သိမြင်မှုများ၏စွမ်းရည်ကိုမြဲမြံစေ။ ကျနော်တို့စစ်ဆင်ရေးကသတ်မှတ်အဖြစ်လိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်မှုသိသိသာသာ, ပြဿနာ hypersexuality ကြိုတင်ခန့်မှန်းမယ်လို့တွေးဆ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5) (လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders အပေါ် WorkgroupAmerican Psychiatric Association, 2010), စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ (1) ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အချိန်ညှိ (2) Impulse (Schwartz & Abramowitz, 2003လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နှင့်အတူ), (3) စိတ်ခံစားမှု dysregulation, (4) ပြဿနာများကို (Bancroft & Vukadinovic, 2004), နှင့် (5) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (Kalichman & Rompa, 1995, 2001).
ဤဆောင်းပါးတွင်များအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွ gay- တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကိုအပျေါကောက်ယူခဲ့ကြခြင်းနှင့်နယူးယောက်မြို့များတွင်ရိုးရိုး-များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းယောက်ျား hypersexuality ၏ကိစ္စရပ်များကိုအာရုံစိုက်။ လေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အလားတူပေမယ့်သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးနှင့်အပြုအမူဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို-The hypersexuality ၏ defining အင်္ဂါရပ်များတွင်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးသောမှအတိုင်းအတာအတွက်ကွဲပြားခဲ့ကြတဲ့သူရိုးရိုးယောက်ျားစာရင်းသွင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ စီမံကိန်းအတွက်စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရသော 202 ယောက်ျားတစ်ဦးကနဦးဆောင်များတွင်အာရုံစိုက်ဤဆောင်းပါးကိုအဘို့အလေ့လာဆန်းစစ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 အစပိုင်း၌ကျနော်တို့စုဆောင်းမဟာဗျူဟာများပေါင်းစပ်အသုံးချဖို့သင်တန်းသားများစာရင်းသွင်းစတင်ခဲ့ပြီး: (1) တုံ့ပြန်-မောင်းနှင်နမူနာ; လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် (2) အင်တာနက်-based ကြော်ငြာများ; နယူးယောက်မြို့လိင်တူချစ်သူလိင်ပါတီ listservs မှတဆင့် (3) ကိုအီးမေးလ်ပေါက်ကွဲမှုများ; နှင့် (4), ထိုကဲ့သို့သောလိင်တူချင်းအရက်ဆိုင် / ကလပ်အသင်းများနှင့်လိင်ပါတီများအဖြစ်နယူးယောက်မြို့ကွင်းအတွက်တက်ကြွစွာစုဆောင်းမှု။ သင်တန်းသားများကိုအင်တာနက်ကနေသို့မဟုတ်တက်ကြွစွာနေရာ-based စုဆောင်းမှုဆိုင်းအတွက်စုဆောင်းဖြစ်စေအွန်လိုင်းစစ်တမ်း site ကို Qualtrics (မှတဆင့်အကျဉ်းစစ်တမ်းအသုံးချဖို့ Pre-ပြခဲ့ကြwww.qualtrics.com) သို့မဟုတ်အသီးသီး iPod Touch ကိုမှတဆင့်တစ်ဦးကိုမိုဘိုင်းစစ်တမ်း။ ဤသည်ကို pre-screen ကိုကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီးသောအခြားလေ့လာမှုများမှသက်ဆိုင်ရာ variable တွေကိုအပြင်လိင်လက်တွဲဖော်အရေအတွက်အကဲဖြတ်။ အားလုံးသင်တန်းသားများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသောအရည်အချင်းပြည့်မီအတည်ပြုပေးရန်အကျဉ်း, ဖုန်း-based စိစစ်အင်တာဗျူးပြီးစီး: အသက်အနည်းဆုံး 1 နှစ်ပေါင်းမှာ (18); (2) ဇီဝယောက်ျားနှင့် Self-ဖော်ထုတ်အထီးသကဲ့သို့, (3) ကိုကြိုတင် 90 ရက်အတွင်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုနှင့်အတူကြိုတင် 30 နေ့ရက်ကာလ၌ကိုးကွဲပြားခြားနားသောအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏နိမ့်ဆုံး, (4) လိင်တူချစ်သူအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်ခြင်း, ရိုးရိုး, ဒါမှမဟုတ်တချို့သည်အခြား Non-လိင်ကွဲဝိသေသလက္ခဏာ (ဥပမာ queer); အင်တာနက်နှင့် (5) နေ့စဉ် access ကိုအင်တာနက်-based အကဲဖြတ် (ဆိုလိုသည်မှာမှာ-အိမ်မှာစစ်တမ်းများနေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီ) ဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်။
သင်တန်းသားများကို Mini-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေစာမေးပွဲ (MMSE) ရက်နေ့သူတို့ပါဝင်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်မယ်လို့အလေးအနက်သိမြင်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါချို့ယွင်းအထောက်အထားသရုပ်ပြလျှင် 23 တစ်ရမှတ်များကညွှန်ပြသကဲ့သို့, စီမံကိန်းကိုမှဖယ်ထုတ်လိုက်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းခဲ့ကြသည် (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975) သို့မဟုတ် DSM-IV-မှာ IR များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူး (SCID) ၏ psychotic လက္ခဏာတွေသို့မဟုတ်သတ်သေကဏ္ဍများအပေါ်တက်ကြွစွာနှင့်စီမံခြင်းမပြုရသေးသောရောဂါလက္ခဏာအထောက်အထား (ပထမ ဦး စွာ Spitzer, Gibbon, & Williams, 2002).
ကျနော်တို့ကဤမိတ်ဖက်အနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိုတင် 90 ရက်အတွင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကြိုတင်ကျောင်းအပ်ဖို့ 30 ရက်ပေါင်းအနည်းဆုံးကိုးဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်းအဖြစ်အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွ operationalized ။ ဤရွေ့ကား cutoffs (ကြိုတင်သုတေသနအပေါ်အခြေခံခဲ့ကြGrov et al ။ , 2010; Parsons, Bimbi, & Halkitis, 2001; Parsons et al ။ , 2008), မြို့ပြ MSM (တစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ-based နမူနာအပါအဝင်et al တင်းကုပ်။ , 2002, 2003) ထို9မိတ်ဖက်လိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ထက်ပို 2-3 ကြိမ်ပျမ်းမျှအရေအတွက်ကခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပါဝင်သည်ရာ, ထိုပါဝင်သူအော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလားအလာရှိခဲ့ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူမည်သည့်အထီးမိတ်ဖက်နှင့်အဆက်အသွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မခံခဲ့ရ, လက်ခံ / INSERT စအိုလိင်ဆက်ဆံ, လက်ခံ / INSERT ပါးစပ်လိင်ဆက်ဆံမှု, ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်နှုတ်စအိုဆွနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေ။ အားလုံးရထိုက်ခွင့်စံနှုန်းများလိင်သတ်မှတ်ချက်ပြက္ခဒိန် (တဦးတည်းရဲ့နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတ်မိဖို့အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်အချိန်ဇယားကိုအောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်အင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. အတည်ပြုခဲ့သည်ခံနှင့်တကွ, အခြေခံချိန်းမှာအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်Sobell & Sobell, 1992).
လေ့လာမှုမှာပါဝင်မှု (အင်တာနက်-based) Home-မှာ In-ရုံးအကဲဖြတ်နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ပတ်သက်။ သုတေသနဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဖုန်းကျော်ကသင်တန်းသားများကို '' ရထိုက်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုကြိုတင်ဖြည့်စွက်ဖို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်နာရီယူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး In-ရုံးချိန်းဖို့အိမ်မှာအင်တာနက်-based စစ်တမ်းဖြည့်စွက်ဖို့ link ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ မှာ-အိမ်မှာစစ်တမ်းဖြည့်များအတွက်ကနဦးအသိပေးသဘောတူညီခကျြအွန်လိုင်းစစ်တမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရယူခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုထို့နောက်သုတေသန site ကိုမှာနှစ်ခုအခြေခံချိန်းတဲ့စီးရီးပြီးစီးခဲ့နှင့်၎င်းတို့၏ပထမဦးဆုံးသောမျက်နှာ-to-မျက်နှာချိန်း၏အစအဦးမှာတစ်နှစ်ကြာစီမံကိန်းတွင်သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးနယူးယောက်၏စီးတီးတက္ကသိုလ်ရဲ့ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်လိင်နှင့် ပတ်သက်. maladaptive သိမြင်မှုကိုတိုင်းတာရန်ရည်ရွယ်အသစ်ဖန်တီးတူရိယာများ၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများဆနျးစစျဖို့အခြေခံမှာ-အိမ်မှာစစ်တမ်းအချက်အလက်ပေါ်သီးသန့်အလေးထားပါသည်။
လိင်စကေးအကြောင်းကို Maladaptive သိမြင်မှု
60 ယောက်ျားနှင့်အတူအရည်အသွေးအင်တာဗျူးတွေပါဝင်တဲ့လက်ရှိလေ့လာမှုအတွင်းက၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်လိင်စကေး (MCAS) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Maladaptive သိမြင်မှု, တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာမှု၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမတိုင်မီကကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါအရည်အသွေးအင်တာဗျူးများနောက်ပိုင်းတွင်ဤနေရာတွင်ကူးရေးသောခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုအထွေထွေရှုထောင့်အကဲဖြတ်များအပြင်လိင်မီနှင့်အပြီးပုံမှန်အတှေး '' လိင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အခြေအနေတွင်, အင်တာဗျူးတွင်လည်းပါဝင်သူများ၏ content နှင့် ပတ်သက်. တိကျသောမေးခွန်းများကိုပါရှိသော '' ။ ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာသင်တန်းသားများကိုပြဿနာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် hypersexuality ကြုံနေရသောသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်တစ်ခုအကဲဖြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီမှတ်တမ်းကိုဖတ်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်အဖြစ်, ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာ hypersexuality နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်အားထင်ရှားကြောင်း maladaptive သိမြင်မှု၏ပဏာမစာရင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအ maladaptive သိမြင်အသုံးပြုသွားမည်နှင့်စကေးပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်တစ်ခုကြားမှာအခမဲ့-စာရင်းချဉ်းကပ်ရာကလူ maladaptive သိမြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အတိုင်းအတာဆန်းစစ်ဖို့ရည်ရွယ်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းများကိုများ၏ content ပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ပေးနှင့်တည်းဖြတ်မူများကိုအကြံပြုသူကိုလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ၏ဧရိယာ၌ကျွမ်းကျင်သူများနေသောလက်တွေ့နှင့်လူမှုရေးစိတ်ပညာရှင်နှင့်အတူတိုင်ပင်။ ,
ဒီကြားမှာလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖမ်းဆီးဖို့မျှော်လင့်ကြောင်း maladaptive သိမြင်မှုသုံးခုယေဘုယျ domains များဖွံ့ဖြိုး: လိင်များ၏လိုအပ်ချက် (ဆိုလိုသည်မှာချဲ့လိုအပ်ချက်သည် subscale) ခြီးမှမျးသ (1), (2) (ဆိုလိုသည်မှာထုတ်ပယ်ခံရသောလိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများ disqualifying အကျိုးကျေးဇူးများ subscale) နှင့် (3) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးနှင့်အပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာ, အနည်းငယ်မျှသာကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscale) ကိုထိန်းချုပ်ဘို့တရဲ့ Self-ထိရောက်မှုအသေးအဖွဲ။ ကျနော်တို့ 17 ပစ္စည်းများစုစုပေါင်းဖွံ့ဖြိုး: လိင်များ၏လိုအပ်ချက်ခြီးမှမျးသနှငျ့ပတျသကျသောခုနစ်ပါးသောပစ္စည်းများ (ဥပမာ, "ငါငါကြည့်ရှုသည်လမ်းအကြောင်းကိုကောင်းသောခံစားရရန်လိင်လိုအပ်ပါတယ်"), လိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများ disqualifying နှငျ့ပတျသကျသောခုနစ်ပါးသောပစ္စည်းများ (ဥပမာ, "လိင်ဆောင် ") နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိရောက်မှုအသေးအဖွဲမှပိုင်သုံးပစ္စည်းများ (ဥပမာ," ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးမှပဲလိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားများသောအားဖြင့် "ကထွက်ရှာငါ့ကိုဦးဆောင်) ။ အတိုင်းအတာထဲမှာဖမ်းမိအဆိုပါသိမြင်မှသာသူတို့ကလိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစား၏ကြီးစိုး mode ကိုသောအတိုင်းအတာအထိ maladaptive ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျနော်တို့ 1 (ထံမှပြင်းထန်မှုအတွက်တိုးပွားလာကြောင်းတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်စရာအသုံးပြုသွားမည်ဘယ်တော့မှမ) (5 မှအချိန်အားလုံး) အတှေးအ maladaptive အတှေးအများ၏ပုံမှန်ကြောင်းတစ် All-or-ဘာမျှဖက်ရှင်အတွက် ပို. ပို. Polarized ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်သောအတိုင်းအတာအထိဖမ်းယူဖို့။
ဤအဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်အသုံးပြုအားလုံးအရေအတွက်အတိုင်းအတာမှာ-အိမ်မှာစစ်တမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြီးစီးခဲ့ကြသည်။ သဘောတူညီခကျြစစ်တမ်းနှင့်အတူဆက်လက်ပေးအပ်ပြီးနောက်တက်ရောက်လာသူများကိုနောက်ထပ်အတိုင်းအတာအသီးအသီးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့် hypersexuality အစီအမံများနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာ, ပြီးစီးခဲ့သည်။ အားလုံးအစီအမံအကြောင်းအရာအလိုက်လုပ်ကွက် (ဥပမာ, အမည်းစက်, လိင်, စိတ်ကျန်းမာရေး) သို့အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်နှင့်လုပ်ကွက်အတွင်းစစ်တမ်းနှင့်အစီအမံများအတွင်းလုပ်ကွက်၏အမိန့်နှစ်ခုလုံးကိုအညီအမျှအမှတ်စဉ် positioning ကိုနှင့် Prime ကနေရလဒ်နိုငျသောအမိန့်သက်ရောက်မှုဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက် randomized ခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းသားများကိုအသက်, ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေး, လိင်, ပညာရေးနောက်ခံ, ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းနှင့် HIV ပိုး status ကိုအပါအဝင်တော်တော်များများလူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ, သတင်းပို့ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အခမဲ့-တုံ့ပြန်မှု format ကိုသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သောအသက်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများစံကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတုံ့ပြန်မှု options များသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အခါလိုအပ်သော, (အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအမျိုးအစားသို့သိပ်သည်းကြ၏စားပွဲတင် 1).
ပြိုင်ပွဲ / Ethnicity
Black က 33 16.3
လက်တင် 30 14.9
အဖြူ 114 56.4
အာရှ / ဇာတိ Haw./Pac ။ ကျွန်းသူကျွန်းသား42.0
Multiracial / အခြား 16 7.9
အခြား / အမည်မသိ52.5
အနုတ် 121 59.9
အပြုသဘောဆောင်သော 81 40.1
လိင်တူချစ်သူ, queer, ဒါမှမဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံသူ 172 85.6
ရိုးရိုး 24 11.9
အခြားလိင်မတူသူ62.5
အချိန်ပြည့် 70 34.7
အချိန်ပိုင်း 50 24.8
မသန်စွမ်းမှုအတွက် 23 11.4
ကျောင်းသား (အလုပ်လက်မဲ့) 18 8.9
အလုပ်လက်မဲ့သော 41 20.3
အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာ / GED သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း 23 11.4
ကောလိပ်သို့မဟုတ်တွဲဖက်ဘွဲ့အချို့ 61 30.2
ဘွဲ့သို့မဟုတ်အခြား4နှစ်ဒီဂရီ 66 32.7
ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီ 52 25.7
တခုတည်းသော 159 78.7
ပူးပေါင်း 43 21.3
(နှစ်အတွင်း) အသက်အရွယ် 37.03 11.35
သီးခြား window တွင်ပွင့်လင်း
သင်တန်းသားများကို Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory (HDSI), ကအဆိုပြုထားတစ်ခုတူရိယာပြီးစီး အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးရဲ့ DSM-5 လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders အပေါ် Workgroup (2010)။ အဆိုပါစကေးခုနစ်ခုပစ္စည်းများကြိုတင်ခြောက်လအတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့စံကိုတိုင်းတာနှစ်ခုအပိုင်း (ကဏ္ဍများကို A နှင့် B) သို့ခွဲစုစုပေါင်းပါဝင်ပါသည်။ ပုဒ်မတစ်ခု, ပျင်း, ဥပမာ, "အတိတ်6လအတွင်းစဉ်အတွင်း, ငါသည်ခဲယဉ်းခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအသုံးပြုကြပါပြီ, ဥပမာ, ဝမ်းနည်းမှုစိတ်မပူပါနဲ့ (မှုများထပ်တလဲလဲနှင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်တိုင်းငါးခုပစ္စည်းများပါဝင်သည်တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူတွေ စိတ်ပျက်အပြစ်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်း ") နှင့်ပုဒ်မ B ကိုကဤစိတ်ကူးယဉ်၏ရလဒ်အဖြစ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချို့ယွင်းတိုင်းတာခြင်းနှစ်ခုပစ္စည်းများပါဝင်သည်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူတွေ (ဥပမာ," အတိတ်6လအတွင်းစဉ်အတွင်းမကြာခဏနှင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူပါပြီ ) "ကိုယ်ရေး, လူမှုရေး, အလုပ်အတွက်ငါ့အဘို့သိသိသာသာပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ငါ့အသက်ကို၏အခြားအရေးကြီးသောဒေသများ။ တုံ့ပြန်ချက် (0 ကနေသွင်းယူပေးခဲ့သည်စစ်မှန်တဲ့ဘယ်တော့မှမ) (4 မှနီးပါးအမြဲစစ်မှန်တဲ့), အရာ0ထံမှ 28 အထိစုစုပေါင်းပြင်းထန်မှုရမှတ်များကိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ items ဒီနမူနာအတွက်ခိုင်မာတဲ့ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = 0.90) ၏အထောက်အထားသရုပ်ပြခဲ့သည်။ Polythetic အဖြေရှာတဲ့စံ3သို့မဟုတ်4Wee ၏တန်ဖိုးများကို 1 အဖြစ် coded အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားသူတွေ0အဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်မထွက်ရ dichotomies သို့တုန့်ပြန် recoding လိုအပ်ကြောင်းအဆိုပြုထားပြီ။ အဆိုပါ recoding ပြီးနောက် hypersexuality များအတွက်အပြုသဘောဆောင်စိစစ်4အနည်းဆုံး5၏ရှေ့မှောက်တွင်အဖြစ် operationalized ခဲ့သည်ပုဒ်မတစ်ဦးအတွက်အပြုသဘောနှိပ်ပါ variable တွေကိုနှင့်ပုဒ်မခအတွက် 1 အနည်းဆုံး2မတိုင်မီကသုတေသနအတိုင်းအတာနှင့်၎င်း၏ cutoff (ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရရှိသည်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်Parsons et al ။ , 2013).
သင်တန်းသားများကို (ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး၏အကျဉ်း, 14-item ကိုဗားရှင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကြေးခွံပြီးစီးBancroft, ဂရေဟမ်, Janssen, & Sanders, 2009; Bancroft & Janssen, 2000), သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တားစီး) အခြေခံမှဆိုခဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များတိုင်းတာသည်။ အတိုင်းအရှည်, ( "နှိုးဆော်ခြင်းတစ်လိင်ဆွဲဆောင်မှုလူစိမ်းမတော်တဆငါ့ကိုထိတဲ့အခါ, ကျနော်အလွယ်တကူဖြစ်လာသည်" ဥပမာ,) လူမှုရေးအခြေအနေများမှရရှိလာတဲ့ arousal အကဲဖြတ်ကြောင်းခြောက်လပစ္စည်းလိင် (ဥပမာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကနေရရှိလာတဲ့တားစီးအကဲဖြတ်ကြောင်းလေးပစ္စည်းများပါဝင်သည် ) "ကျွန်မစိတ်အာရုံထွေပြားအတွေးရှိတဲ့အခါ, ကိုယ့်ကိုအလွယ်တကူငါ၏အစိုက်ထူဆုံးရှုံး", ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် masturbating ငါနှင့်ငါတစ်စုံတစ်ဦးလာနိုင်ဖွယ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားလျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် (ဥပမာ "၏အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကနေရရှိလာတဲ့တားစီးအကဲဖြတ်ကြောင်းလေးပစ္စည်းများ မည်သည့်အခိုက်မှာအခန်းထဲသို့ကျွန်မ) "ငါ၏အစိုက်ထူဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ တုန့်ပြန်ရွေးချယ်စရာ 1 (ထံမှအရွယ်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ) (4 မှပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, တစ်ဦးချင်းစီ subscale ထံမှပစ္စည်းမှတုံ့ပြန်မှုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းများနှင့်တားစီးနှစ်ခုညွှန်းကိန်းဖွဲ့စည်းရန်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည် (ဆိုလိုသည်မှာ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးငါ" လိင်ဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး II ကို" စိုးရိမ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာ ) အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံများကနေရရှိလာတဲ့တားစီးဖို့သက်ဆိုင်ရာ။ ဤသုံးပါး subscales များအတွက် internal ကိုက်ညီမှု 0.70 ထံမှ 0.81 မရသေးသည်လည်းရှိသည်။
သင်တန်းသားများကိုကို (30-ကို item Barratt Impulse စကေးဗားရှင်း 11 (bis-11) ပြီးစီးPatton, Stanford, & Barratt, 1995) ။ အာရုံစူးစိုက်မှု Impulse (ဥပမာ, "ငါအတှေးပြိုင်ကားကြပါပြီ"), မော်တာ Impulse (ဥပမာ "ကျွန်မသုံးဖြုန်းသို့မဟုတ်ငါဝင်ငွေထက်ပိုမိုကောက်ခံ") နှင့်မဟုတ်တဲ့: အဆိုပါစကေးသုံးယေဘုယျ domains များပေါ်သို့ load ကြောင့် Impulse ခြောက်တိကျတဲ့အမျိုးအစားများကိုတိုင်းတာသောပစ္စည်းများပါဝင်သည် Impulse -planning (ဥပမာ "ကျွန်မအနာဂတျမှာထက်ပစ္စုပ္ပန်တွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်") ။ တုန့်ပြန်ရွေးချယ်စရာ 1 (ထံမှအရွယ်ရှိခဲ / ဘယ်တော့မှ) (4 မှနီးပါးအမြဲ / အမြဲတမ်း) အရာ 30 ထံမှ 120 အထိနိုင်ကြောင်း Impulse များအတွက်စုစုပေါင်းရမှတ်ရရှိရန်ပစ္စည်းများဖြတ်ပြီးချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ဒီစကေးများအတွက် internal ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = 0.84) ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကို (Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေစကေး (DERS) နှင့်အတူ 36-ကို item အခက်အခဲများပြီးစီးGratz & Roemer, 2004) ထိုစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိယေဘုယျပြဿနာများအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်အတူအခက်အခဲခြောက်တိကျတဲ့ domains များတိုင်းတာသည်။ သင်တန်းသားများကို (1 နေစကေးအပေါ်တုန့်ပြန်နီးပါးဘယ်တော့မှ [0-10%]) (5 မှနီးပါးအမြဲ [91-100%]) တစ်ဦးချင်းစီကို item ဖို့နဲ့, ဒီဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်, ကျနော်တို့ 36 ပစ္စည်းများဖြတ်ပြီးယုတ်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်တွက်ချက်ပြည့်စကေးရမှတ်, အသုံးပြုသွားမည်။ ဒီအတိုင်းအတာအဘို့အ internal ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = 0.94) ခိုင်မာသော
သင်တန်းသားများကိုကို (အကျဉ်းချုပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ Inventory (BSI) ၏ 12-item တခုကိုတော့ပူပန်ခြင်းနှင့်စီးပွားပျက်ကပ် subscales ပြီးစီးDerogatis, 1975), အရာ 53 ပစ္စည်းများနှင့်ကိုးလက္ခဏာရှုထောင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပါဝင်သည်။ ကြိုတင်သီတင်းပတ်အတွင်းနှစ်ခု subscales တစ်ခုချင်းစီ (ဥပမာ, "အနာဂတျအကွောငျးကူကယ်ရာမဲ့ Feeling") စိတ်ကျရောဂါ၏လက်ခဏာတိုင်းတာရန်ရည်ရွယ်ခြောက်လပစ္စည်းများဆံ့သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန် (ဥပမာ, "သင်ကောင်းကောင်းထိုင်လို့မရဘူးဒါနာမငြိမ် Feeling") ။ တုံ့ပြန်ချက်ရွေးစရာများ (0 ထံမှအရွယ်ရှိအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး) (4 မှအလွန်) ။ တစ်ခုချင်းစီကို subscale ရမှတ်ခြောက်ပစ္စည်းများတလွှားကဉျြးခြုပျမြားနှငျ့နှစ်ဦးစလုံး subscales ၏ခု၏ပိုပြီးယေဘုယျစိတ်ဓါတ်များ-related နှင့်စိုးရိမ်ပူပန် symptomology တစ်ရမှတ်ဖွဲ့စည်းရန်ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ နှစ်ခု subscales ခိုင်မာတဲ့ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = 0.93) နဲ့တစ်ခုတည်းအညွှန်းကိန်းသို့ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုကို (လိင် compulsive စကေး (SCS) ပြီးစီးKalichman et al ။ , 1994; Kalichman & Rompa, 2001) ။ အဆိုပါ SCS (လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအများစုအသုံးများအတိုင်းအတာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးနှင့်လိင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတှေးဖြစ်ပါသည်Hook, ချိတ်, Davis က, Worthington, & Penberthy, 2010) ။ ဒါဟာ 10 (နေ Likert-type အမျိုးအစားစကေးအပေါ် rated ခဲ့ပြီးသော 1 ပစ္စည်းများ (ဥပမာ, "ကျနော့်အလိုဆန္ဒများကိုလိင်ငါ့အကိုနေ့စဉ်အသက်တာကိုနှောင့်အယှက်ရှိသည်ဟုရှိသည်") ပါဝင်ပါသည်မဟုတ်မှာအားလုံးငါကဲ့သို့သော) (4 မှအလွန်ငါကဲ့သို့သော) ။ တစ်ဦးချင်းစီကို item မှတုံ့ပြန်ချက်အနေနဲ့ခြုံငုံရမှတ် (အကွာအဝေး 10-40) ရယူထားခြင်းမှချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ SCS မျိုးစုံလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာစကေးခိုင်မာတဲ့ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (α = 0.89) ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူ၏တုန့်ပြန်ချက် - အကြီးစားလိုအပ်မှု၊ အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အနိမ့်ဆုံးကိုယ်ပိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော subscales သုံးမျိုးသည် MCAS စကေး၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုတိကျမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးထွားမှုလိုအပ်ချက်နှင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအကျိုးကျေးဇူးများခွဲတံဆိပ်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု orthogonal ဟုတ်မဟုတ်ကို ထပ်မံ၍ စမ်းစစ်ခဲ့သည်။ Mplus ဗားရှင်း ၆.၁၂ ကို အသုံးပြု၍ အတည်ပြုသည့်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (CFA) မော်ဒယ်ကို ၁-၇ မှအချက်အလက်များသည် Magnified Necessity subscale သို့၊ အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအကျိုးကျေးဇူးများခွဲငယ်ရှိအမှတ် ၈-၁၄ နှင့်အနိမ့်ဆုံးကိုယ်ပိုင် Self-on ပစ္စည်းများ ၁၅ မှ ၁၇ နှင့်အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထိရောက်မှု subscale ။ CFA အတွင်းမှာပဲစံပုံစံစံညွှန်းကိန်းများကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။Amtmann et al ။ , 2010, 2012; Bentler, 1990; Hu & Bentler, 1999; Kline, 2010; Reise & Haviland, 2005; အနောက်, Finch, & Curran, 1995), 0.95 ထက် သာ. ကြီးမြတ်နှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (CFI) ပါဝင်သည်သောအမြစ် 0.06, 0.95 ထက် သာ. ကြီးမြတ် Tucker Lewis ကအညွှန်းကိန်း (TLI), နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီအမြစ်စတုရန်းကျန်နေတဲ့ (SRMR) 0.08 ထက်လျော့နည်းဆိုလိုထက်လျော့နည်းအကြမ်းဖျင်း၏စတုရန်းအမှား (RMSEA) ကိုဆိုလိုတာ။ ငါတို့သည်လည်းအလားအလာကျန်နေတဲ့ဆက်စပ်မှုနှင့်မော်ဒယ် misfit ၏အခြားဒြပ်စင်များရှိခဲ့ကြောင်းပစ္စည်းများ detect လုပ်ဖို့ပြုပြင်မွမ်းမံညွှန်းကိန်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ CFA ၏ရလဒ်များကိုအချက်များအသုံးပြုခြင်းကျနော်တို့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ကို hypersexuality များအတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအပြင်သုံးယောက် subscales တို့တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (SEM) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ချဲ့လိုအပ်ချက်သည်နှင့် Disqualified subscales uncorrelated ခဲ့ကြသည်ရောင်းချသူအကျိုးအမြတ်အတွက်မော်ဒယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ငုပ်လျှိုးနေချဲ့လိုအပ်ချက်သည်ပေါ်သို့ငုပ်လျှိုးနေလျော့ချ Self-ထိရောက်မှုအချက် regressed နှင့် Disqualified (ဆိုလိုသည်မှာကျနော်တို့အဲဒီနှစျခု subscales ဟာအနည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscale ဟောကိန်းထုတ်ရှိမရှိဆန်းစစ်) အချက်များကျေးဇူးပြုတတ်၏။ ကျနော်တို့ MCAS ၏ငုပ်လျှိုးနေ subscales သုံးခုစလုံးပေါ်သို့ hypersexuality စိစစ်ရလဒ်၏မန်နီးဖက်စ် (ဆိုလိုသည်မှာလေ့လာတွေ့ရှိ) variable ကို regressed (ဆိုလိုသည်မှာကျနော်တို့သုံးယောက် subscales hypersexuality များအတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြဟောကိန်းထုတ်ရှိမရှိဆန်းစစ်) နှင့်ကျနော်တို့၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေး ကိုချီးမြှင့်လိုအပ်ချက်သည်နှင့် Disqualified hypersexuality စိစစ်အပေါ် subscales ရောင်းချသူအကျိုးအမြတ် (ဆိုလိုသည်မှာကျနော်တို့ hypersexuality စိစစ်ပေါ်ဤအကြောင်းနှစ်ခု subscales ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုနှင့်အတူသူတို့၏ဆကျဆံရေးမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်) ။
ကျနော်တို့လာမယ့် SPSS ဗားရှင်း 20 သုံးပြီးငုပ်လျှိုးနေမော်ဒယ်မူဘောင်၏အပြင်ဘက်တွင်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏စီးရီးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ CFA ၏ရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့က subscale အတွင်းရှိသမျှသောပစ္စည်းများအတွက်ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုအဖြစ် subscale ရမှတ်များတွက်ချက်။ ကျနော်တို့ MCAS subscale ရမှတ်များနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆနျးစစျဖို့ Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုကိန်းနှင့်ကှဲလှဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) အသုံးပြုသွားမည်။ ကျနော်တို့လာမယ့်အခြားအဆိုခဲ့သို့မဟုတ်မျက်မြင်လက်တွေ့ Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှုကိန်းသုံးပြီး hypersexuality ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်း (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး, Impulse, စိတ်ခံစားမှု dysregulation, စိတ်ကျရောဂါ / စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive) သရုပ်ပြအတူသုံး subscales ၏ bivariate အသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ hypersexuality စိစစ်ရလဒ်များအခြားယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ် HIV ပိုးအခြေအနေ, hypersexuality-related Construction ၏တိုင်းတာခြင်းအတွက်သရုပ်ပြသဖွငျ့ variable ကို (များအတွက်ချိန်ညှိအပေါ် MCAS subscale ရမှတ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် utility ကိုဆနျးစစျဖို့ Logistic ဆုတ်ယုတ်အသုံးပြုသွားမည် ဥပမာ Grov et al ။ , 2010; Parsons et al ။ , 2012, 2013).
တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် စားပွဲတင် 1ယင်းနမူနာအသက်, ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေး, HIV ရောဂါအခြေအနေ, အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။ နမူနာတစ်ခုအများစုမှာအနည်းဆုံးအချို့ကောလိပ်သို့မဟုတ် post-secondary ပညာရေးနှင့်အများဆုံးလူတို့သညျမိမိတို့အကနဦးချိန်းဆိုသည့်အချိန်တွင်တစ်ခုတည်းရှိကြ၏။ ကျမတို့ကလည်းဘယ်တိကျတဲ့လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ oversample ကြိုးစားခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာ (အထူးသဖြင့် HIV ပိုး status ကိုအများအပြားအချက်များနှင့် ပတ်သက်. MSM ၏အထွေထွေသောလူဦးရေထက်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားခဲ့Smith က et al ။ , 2010).
လိင်စကေး ပတ်သက်. Maladaptive သိမြင်မှု၏ factor ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
အဆိုပါ CFA ၏ရလဒ်များကိုမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 2။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကနဦးဆန်းစစ်ကောက်ယူပြီးတော့မျိုးစုံအချက်များပေါ်သို့ထိုကဲ့သို့သောဒေသခံမှီခို (ဆိုလိုသည်မှာ, ပစ္စည်းများအကြားကျန်နေတဲ့ဆက်စပ်မှု) နှင့် Cross-တင်အဖြစ် psychometric ရောဂါများပပျောက်ဖို့မော်ဒယ် parameters တွေကိုနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံညွှန်းကိန်းအပေါ်အခြေခံပြီးစကေးမှကြားမှာပြုပြင်မွမ်းမံဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီပြဿနာတွေကိုအလွယ်တကူကစာရင်းအင်းငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုသုံးပြီးဆက်ဆံခံရနိုငျသျောလညျးထိုကဲ့သို့သောပျှမ်းမျှကို item တုံ့ပြန်မှုထက်အချက်သရုပ်ခွဲရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက် subscale ရမှတ်များနှင့်အတူရိုးရှင်းသော linear ဆုတ်ယုတ်အဖြစ် Non-ငုပ်လျှိုးနေမော်ဒယ်သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါ, သူတို့ကအခက်အခဲတင်ပြရန်။ ကဲ့သို့သောဤဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်မြင်စွာအတွင်းနှင့်ငုပ်လျှိုးနေမော်ဒယ်မူဘောင်၏အပြင်ဘက်တွင်နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသွားမည်နိုင်မယ့်အတိုင်းအတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
သုံးယောက် MCAS Subscales ၏ကနဦးနှင့်နောက်ဆုံး confirmatory Factor & Models
ကနဦး Factor Loading
ဗိုလ်လုပွဲ Factor Loading
1 ။ ငါပိုကောင်းတဲ့အိပ်လိင်လိုအပ်ပါတယ် 1.00a0.76 0.04 c c c c
2 ။ ငါအလေးပေးငါလာသောအခါငါနှိမ့်ချငြိမ်သက်ဖို့လိင်လိုအပ်ပါတယ် 1.01 0.09 0.80 0.03 1.00a0.75 0.04
3 ။ ငါပျင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်လိင်လိုအပ်ပါတယ် 0.87 0.09 0.71 0.04 0.92 0.10 0.70 0.04
4 ။ ငါကြည့်ရှုသည်လမ်းအကြောင်းကိုကောင်းသောခံစားရရန်လိင်လိုအပ်ပါတယ် 0.82 0.10 0.61 0.05 c c c c
5 ။ ငါအာရုံစူးစိုက်ကူညီပေးဖို့လိင်လိုအပ်ပါတယ် 0.90 0.09 0.72 0.04 0.95 0.10 0.71 0.04
6 ။ ငါသည်အခြားသောသူတို့အားငါ့ကွန်နက်ရှင်ပိုကောင်းလာစေဖို့လိင်လိုအပ်ပါတယ် 0.84 0.11 0.59 0.05 0.90 0.11 0.60 0.05
7 ။ ငါအပန်းဖြေဖို့လိင်လိုအပ်ပါတယ် 0.86 0.09 0.72 0.04 0.96 0.10 0.76 0.04
ခန့်မှန်း Factor ကှဲလှဲ 0.84 0.14bb 0.75 0.13bb
8 ။ ငါ masturbate ရန်မလိုအပ်သင့်ပါတယ် 1.00a0.44 0.06 c c c c
9 ။ လိင်အချိန်ဖြုန်းဖြစ်တယ် 1.27 0.22 0.72 0.04 1.00a0.78 0.04
10 ။ လိင်ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးမှဦးဆောင် 1.56 0.25 0.86 0.03 1.07 0.11 0.82 0.04
11 ။ လိင်ကြိုးစားရကျိုးနပ်မဖြစ် 1.34 0.23 0.73 0.04 0.99 0.10 0.75 0.04
12 ။ လိင်ဒုက္ခမှဦးဆောင် 1.23 0.21 0.72 0.04 c c c c
13 ။ ငါသည်ငါ့လိင် drive ကိုလျှော့ချဖို့တစ်ဦးဆေးလုံးကိုယူနိုင်ကြလျှင်, ငါလို 1.02 0.21 0.48 0.06 c c c c
14 ။ လိင်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုအသုံးပြုပြီးလူနှစ်ဦးထက်ပိုအချည်းနှီးဖြစ်၏ 0.84 0.19 0.41 0.06 c c c c
ခန့်မှန်း Factor ကှဲလှဲ 0.30 0.10bb 0.57 0.10bb
15 ။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးထဲသို့ဝင်သောအခါ, ငါကတစ်ခက်ခဲအချိန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားလာရင်းရှိ 1.00a0.87 0.02 1.00a0.87 0.02
16 ။ ငါ sex အကြောင်းစဉ်းစား start ပြီးတာနဲ့ငါခက်ခဲအချိန်ရပ်တန့်ပြီ 1.10 0.06 0.93 0.02 1.10 0.06 0.94 0.02
17 ။ ကိုယ့်လိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားများသောအားဖြင့်ကထွက်ရှာငါ့ကိုဦးဆောင် 0.89 0.06 0.79 0.03 0.89 0.06 0.79 0.03
ခန့်မှန်း Factor ကှဲလှဲ 0.83 0.11bb 0.84 0.11bb
ခန့်မှန်းခြေ Covariances ခန့်မှန်းခြေ Covariances
အနည်းဆုံး Self- ထိရောက်မှုနှင့်အတူကြီးမြတ်သောလိုအပ်ချက် 0.44 0.08 0.52 0.06 0.45 0.08 0.57 0.06
အနိမ့်ဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုဖြင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအကျိုးကျေးဇူးများ 0.13 0.04 0.26 0.07 0.12 0.05 0.17 0.07
မော်ဒယ်နဲ့ Fit မော်ဒယ်နဲ့ Fit
CFI / TLI 0.90 / 0.88 0.98 / 0.97
AIC / Adj ။ BIC 9067.68 / 9075.10 5714.57 / 5719.47
မော်ဒယ်χ2 (df) 278.49 (117), p <.001 66.48 (42), p <.01
မှတ်စု။ Unstd ။ = Unstandardized ။ အရှေ့တောင် = နျ Standard မှားယွင်းနေသည်။ std ။ = စံ။
aယင်း၏အချက်တင်အဆိုပါအချက်များ၏စကေးတည်ထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက် 1 မှ fixed ကြောင့်စံအမှားအယွင်းများအတွက် unstandardized မော်ဒယ်အတွက်အချက်တစ်ချက်နှုန်းကိုပထမဦးဆုံးညွှန်ပြဘို့တွက်ချက်မခံခဲ့ရပါ။
bfactor ကှဲလှဲယင်းစံချိန်စံညွှန်းမီမော်ဒယ်အတွင်း 1 မှ fixed ယောက်ခန့်မှန်းမခံခဲ့ရပါ။
အတွက်ကနဦးအချက် Loading ကော်လံ စားပွဲတင်2အားလုံး 17 ပစ္စည်းများနှင့်အတူ CFA ၏ display တွေနှစ်ဦးစလုံး unstandardized နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီသောရလဒ်များကိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအချက်များပေါ်သို့ဝင်ကြ၏။ တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် စားပွဲတင် 2, ကနဦးပုံစံဒေတာ fit မပြုခဲ့ကောင်းစွာ-The CFI နှင့် TLI 0.95 ထက်လျော့နည်းနှင့် RMSEA 0.06 အထက်ခဲ့သည်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ မူရင်းမော်ဒယ် misfit အတော်ကြာသတင်းရင်းမြစ်ရှိခဲ့သည်။ items 8, 13 နှင့် 14 အခြားပစ္စည်းများမှဆွေမျိုး subscale အဆိုပါ Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများပေါ်သို့ညံ့ဖျင်း loaded နှင့်အရှင်အနာဂတ်ကြားမှာမှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ item 1 ကြောင့် item2နှင့် item4နှင့်အတူမြင့်မားကျန်နေတဲ့ဆက်စပ်မှုမှဖယ်ရှားခဲ့သည်ကြောင့်ချဲ့လိုအပ်ချက်သည် subscale အပေါ်အများအပြားကအခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူကျန်နေတဲ့ဆက်စပ်မှုမှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ကျန်နေတဲ့ဆက်စပ်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်အကျိုးစီးပွား၏အချက်အပြင်, ထိုပစ္စည်းများဖြစ်သောမိမိတို့၏ယူကြဘူးသောစကေး၏ဘက်လိုက်မှု Non-ငုပ်လျှိုးနေအသုံးပြုမှုနိုင်သည့်မော်ဒယ်အားဖြင့် unexplained ခဲ့ကျန်ရှိသော covariation အတွက်ရလဒ်ဖြစ်သောဘုံ၌အခြားသော unmeasured Construction shared ကြောင်းအကြံပြု အကောင့်သို့ covariation ။ item 12 ဟာအနည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscale ပေါ်သို့ Cross-တင်အဖြစ်ကြောင်း subscale အပေါ်တော်တော်များများပစ္စည်းများနှင့်အတူအလားအလာကျန်နေတဲ့ဆက်စပ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံး CFA မော်ဒယ်သိသိသာသာထူထောင်တံခါးခုံပေါ်အခြေခံပြီးအချက်အလက်များအားကောင်းတဲ့မထိုက်မတန်ညွှန်ပြသည့် chi-စတုရန်းစမ်းသပ်စာရင်းဇယားထက်အခြားအားလုံးညွှန်းကိန်းနှင့်အတူမထိုက်မတန်, တိုးတက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါချဲ့လိုအပ်ချက်သည် subscale ပစ္စည်းများ 2, 3, 5,6နှင့်7ပါရှိသော; အဆိုပါထုတ်ပယ်ခံရသောအကျိုးကျေးဇူးများ subscale ပစ္စည်းများ 9-11 ပါရှိသော; အဆိုပါအနည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscale ပစ္စည်းများ 15-17 ပါရှိသည်။ ရလဒ်အချက်များလည်းပစ္စည်းများကို-ဥပမာ၏ဖယ်ရှားရေးအားဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည်, ထို Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကှဲလှဲထက်ပိုနှစ်ဆဆခွဲကိန်း။ စိတ်ဝင်စားစရာအချဲ့လိုအပ်ချက်သည်၏ဆက်စပ်မှုနှင့် Disqualified အဆိုပါအနည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscale နှင့်အတူ subscales ရောင်းချသူအကျိုးအမြတ်မူလနှင့်နောက်ဆုံးမော်ဒယ်များအကြားလေးမွတျမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်သည်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ subscales အကြားဆက်စပ်မှု၏တွေးဆမရှိခြင်းပုံစံကထောက်ခံခဲ့သည်။ လွတ်လပ်စွာကွဲပြားခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်အားဖြင့်ခန့်မှန်းခြင်းကိုခံရသောအခါ, ဆက်စပ်မှု 0.07 ဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်, Non-သိသာကြီးနှင့်ခြုံငုံမော်ဒယ်၏မထိုက်မတန်ပိုဆိုးလာတယျ။
MCAS Subscales နှင့် Hypersexuality အကြားတွင်အသင်းမော်ဒယ်
သုံးယောက် MCAS subscales များအတွက်အကောင်းဆုံးသငျ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအတည်ပြုတော်မူပြီးမှ, ငါတို့ဘေးကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထိုသူတို့တွင်ဆက်ဆံရေးနှင့် hypersexuality စိစစ်ရလဒ်များကိုစမ်းသပ်ဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။ အဆိုပါ SEM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များမှာပြနေကြသည် သဖန်းသီး။ 1။ အဆိုပါဆွေးနွေးချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း SEM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အပြုအမူ၏ Self-စည်းမျဉ်းထိရောက်မှုမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်း hypersexuality တစ်သိမြင်မော်ဒယ်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ မော်ဒယ်မထိုက်မတန်အားလုံးညွှန်းကိန်းကောင်းသောမထိုက်မတန်အဘို့အနိမ့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါချဲ့လိုအပ်ချက်သည်နှင့် Disqualified subscales နှစ်ခုအချက်များပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိရောက်မှုပိုအနည်းဆုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့အကြံပြုသည်အနည်းငယ်မျှသာကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscale အပေါ်သိသာထင်ရှားသောတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ရောင်းချသူအကျိုးအမြတ်နှစ်ဦးစလုံး; အဆိုပါချဲ့လိုအပ်ချက်သည် subscale အဆိုပါ Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများ subscale ဖြစ်ခဲ့သည်ထက်အနည်းငယ်မျှသာကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုတစ်သိသိသာသာအားကောင်းခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အားလုံးသုံး subscales သိသိသာသာ hypersexuality များအတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြဟောကိန်းထုတ်နှင့်စိစစ်ရလဒ်များကိုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ 45% ကရှင်းပြသည်။ hypersexuality များအတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြအပေါ်ချဲ့လိုအပ်ချက်သည်နှင့်ထုတ်ပယ်ခံရသောအကျိုးကျေးဇူးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနည်းဆုံးကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်ကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု-နှစ်ဦးစလုံးအနည်းငယ်မျှသာကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုမှတဆင့်သိသာတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးအတွက်, ချဲ့လိုအပ်ချက်သည် Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အနည်းငယ်မျှသာကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုတို့အတွက် 0.55 များအတွက် 0.32 နှိုင်းယှဉ် 0.26 စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ hypersexuality များအတွက်အပြုသဘောဆောင်ပြ၏အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းခဲ့သည်။
လိင်နှင့်ပြဿနာ hypersexuality အကြောင်း Maladaptive သိမြင်အကြားတွင်အသင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်။
ကိန်းစံချိန်စံညွှန်းမီ format နဲ့အစီရင်ခံရသည်။ Hypersexuality ခခနျ့မှနျးသုံးခဲ့ Weighted အနည်းဆုံးစတုရန်းနှင့်အတူ dichotomous ထင်ရှား variable ကိုနှင့် Probit ဆုတ်ယုတ်အဖြစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ ချဲ့လိုအပ်ချက်သည်နှင့် Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများအကြား Covariance0ဟုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကှဲလှဲတင်ပြသည့်စံချိန်စံညွှန်းမီသောရလဒ်များကိုအတွင်း 1 မှခဲ့သည်ဆို၏ခဲ့ကြသည်။ *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p .001 ≤။ မော်ဒယ်နဲ့ Fit: မော်ဒယ်χ2 (DF) = 51.60 (50), p = .41; CFI = 1.00; RMSEA = 0.01; ဖြစ်နိုင်ခြေ RMSEA ≤ .05 = 0.97; WRMR = 0.53 ။
အဆိုပါ MCAS Subscales အတွက်လူဦးရေအချိုးအစားကွာခြားချက်များ
Fisher ကရဲ့အနည်းဆုံးသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (ဆိုလိုသည်မှာ LSD) Post-hoc စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူတစ်လမ်း ANOVA အသုံးပြုခြင်းကျနော်တို့တိုင်းရင်းသား / လူမျိုးရေးနောက်ခံအားဖြင့် Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများ subscale အပေါ်ရမှတ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Black ကယောက်ျား (လက်တင်ထက် Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများ subscale အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ခဲ့p = .004), အဖြူရောင် (p = .02) နှင့်အမည်မသိနောက်ခံလူတို့သညျ (p = .01); လက်တင်ယောက်ျား (multiracial ယောက်ျားထက်နိမ့်ရမှတ်ခဲ့p = .04) က Black ယောက်ျားအပြင်; multiracial မသိသောနောက်ခံ၏ယောက်ျားထက်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များရှိခဲ့သူယောက်ျား (p လက်တင်ယောက်ျားအပြင် = .03) ။ သိသာထင်ရှားသောတိုင်းရင်းသား / လူမျိုးရေးကွဲပြားမှုဟာချဲ့လိုအပ်ချက်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscales နှငျ့ ပတျသကျ. တွေ့ရှိခဲ့သည်ကျနော်တို့သုံးယောက် MCAS အတွက်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုခွဲခြားသတ်မှတ်မပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါ HIV ပိုးအခြေအနေ, အလုပ်အကိုင်, ကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းအားဖြင့် subscales ။
သက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Variables ကိုအတူ MCAS Subscales ၏ Bivariate အစည်းအရုံး
ကျနော်တို့လာမယ့်သီအိုရီသို့မဟုတ်မျက်မြင်လက်တွေ့ hypersexuality impact မှအဆိုပြုထားခဲ့သောသုံး MCAS subscales နှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုအကြား bivariate ဆက်စပ်မှုစူးစမ်း။ တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် စားပွဲတင် 3ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီ Impulse, စိတ်ခံစားမှု dysregulation, စိတ်ကျရောဂါ / စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နဲ့သိသာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းနှင့်တကွ, သုံး subscales ဖြတ်ပြီးအသင်းအဖွဲ့များ၏အလားတူပုံစံများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများ subscale နီးပါးသုညတစ်ကိန်းခဲ့စဉ်ချဲ့လိုအပ်ချက်သည်နှင့်အနည်းငယ်မျှသာကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု subscales သိသိသာသာများနှင့်အပြုသဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သာ Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများ subscale ကနေရရှိလာတဲ့တားစီးနှင့်ဆက်စပ်သောအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး subscale နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့စဉ်အားလုံးသုံး MCAS subscales သိသိသာသာများနှင့်အပြုသဘောကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက် (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးငါ) ၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှတားစီးဖို့သက်ဆိုင်ရာအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး subscale နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး II ကို) ၏ခြိမ်းခြောက်မှု။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုထဲကအတော်များများလည်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အားကောင်းတဲ့အသင်းအဖွဲ့များရှိခဲ့ပါတယ်။
Bivariate ဆက်စပ်မှုနှင့် Hypersexual Disorder နှင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များများအတွက်သရုပ်ဖော်စာရင်းအင်းများ
1 ။ Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း -
2 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား 0.20** -
3 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးငါ 0.19** 0.12 -
4 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး II ကို 0.08 0.12 0.39*** -
5 ။ ထကြွလွယ်သော 0.30*** 0.10 0.18* 0.08 -
6 ။ စိတ်ခံစားမှု Dysregulation 0.40*** 0.14* 0.26*** 0.11 0.58*** -
7 ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့တော့ပူပန် 0.43*** 0.17* 0.27*** 0.13 0.43*** 0.60*** -
8 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive 0.50*** 0.22*** 0.11 0.03 0.42*** 0.41*** 0.34*** -
၉။ MCAS - လိုအပ်သောလိုအပ်မှု 0.36*** 0.36*** 0.15* 0.03 0.31*** 0.42*** 0.43*** 0.45*** -
၁၀။ MCAS - အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအကျိုးခံစားခွင့်များ 0.22** -0.02 0.14* 0.18* 0.23*** 0.18** 0.21** 0.16* 0.06 -
(၁၁) MCAS - မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်း 0.39*** 0.51*** 0.19** 0.13 0.34*** 0.43*** 0.42*** 0.56*** 0.51*** 0.16* -
Cronbach ရဲ့ αb0.81 0.74 0.70 0.84 0.94 0.93 0.89 0.83 0.83 0.90
ahypersexual ရောဂါခွဲခြားနှင့် HIV-positive status ကိုဤ dichotomous variable တွေကိုပြသနေကြတယ်များအတွက် "ဟုတ်ကဲ့" အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်သူများ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အရေအတွက်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးရှိသည်သောအခြား variable တွေကိုအဘို့, နည်းလမ်းနှင့် SDs ပြသလျက်ရှိသည်။
bအဲဒီနှစျခုပစ္စည်းများ Single-ကို item dichotomous ညွှန်းကိန်းတို့ alpha ကိန်းသက်ဆိုင်ရာရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
*p .05 ≤။
**p .01 ≤။
***p .001 ≤။
Logistic Regression Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory ရလဒျကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့ hypersexuality ဤသည်အခြားသီအိုရီအများနှင့်မျက်မြင်လက်တွေ့အခြေပြုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ပုံစံထဲသို့ ဝင်. အခါအသစ်တီထွင် MCAS ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိမ့်မည်ဟုဘယ်လောက်ဆနျးစစျဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။ HIV ပိုး status ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (ဥပမာအဖြစ် hypersexuality-related ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့သရုပ်ပြခဲ့ပြီးအဖြစ်မော်ဒယ် HIV အခြေအနေကိုများအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်, Grov et al ။ , 2010; Parsons et al ။ , 2012, 2013).
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်၏ရလဒ်များကိုမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 4။ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းအဖြစ် variable တွေကို၏ဤပေါင်းစပ် အသုံးပြု. သင်တန်းသားများကိုနီးပါး 87% မှန်ကန်စွာပုံစံအားဖြင့် hypersexual သို့မဟုတ်မဖြစ်စေအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်း (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး II ကို) မှလွဲ. တစ်ဦးချင်းစီ variable ကို bivariate အတွက် hypersexual ခွဲခြားနှင့်ဆက်စပ်ပေမဲ့လေ့လာဆန်းစစ်, သာလေး multivariable မော်ဒယ်များ၏အခြေအနေတွင်သိသိသာသာလွတ်လပ်စွာအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ: HIV ပိုးဖြစ်ခြင်း hypersexual ခွဲခြားနီးပါးသုံးကြိမ်အလေးသာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် တစ်ဦး 2.3 ကြိမ် hypersexual ခွဲခြား၏အလေးသာတိုးပွါးနှင့် 1.2 ကြိမ် hypersexual ခွဲခြားများ၏အလေးသာတိုးပွါးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive တစ်ယူနစ်တိုးဆက်စပ်ခဲ့သည်အတူစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ယူနစ်တိုးဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အသစ်တီထွင် MCAS အတွက်တစ်ဦးကတဦးတည်း-ယူနစ်တိုးတဲ့ 1.8 ကြိမ်ယခင်ကပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်း၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြခြင်း, မော်ဒယ်အတွင်းကတခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်းအားလုံးအတှကျညှိပြီးနောက် hypersexual ခွဲခြားများ၏အလေးသာတိုးပွါးနှင့်အတူ subscale ရမှတ်ဆက်စပ်ခဲ့သည်အကျိုးကျေးဇူးများထုတ်ပယ်ခံရ hypersexuality အပေါ်သုတေသနပြုပါတယ်။
Logistic Regression သက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory (HDSI) စစ်ဆေးခြင်းရလဒ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း
HIV ပိုး-အပြုသဘောဆောင်သောအခြေအနေa1.05 2.86* [1.03, 7.97]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား 0.31 1.36 [0.50, 3.71]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးငါ -0.09 0.92 [0.38, 2.19]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး II ကို 0.06 1.07 [0.48, 2.34]
ထကြွလွယ်သော -0.04 0.96 [0.91, 1.02]
စိတ်ခံစားမှု Dysregulation 0.02 1.02 [0.99 ။ 1.05]
ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့တော့ပူပန် 0.83 2.30* [1.16, 4.57]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive 0.21 1.23*** [1.12, 1.35]
MCAS: ချဲ့လိုအပ်ချက်သည် 0.20 1.23 [0.64, 2.34]
MCAS: Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများ 0.57 1.77* [1.01, 3.10]
MCAS: လျော့ချကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု 0.08 1.08 [0.53, 2.18]
ပုံစံ χ2(df) 87.84*** (11)
-2 ဖြစ်နိုင်ခြေကို Log 115.97
% HDSI တွင်မှန်ကန်စွာခွဲခြားထားသည် 86.1%
မှတ်စု။ CI = ယုံကြည်မှု Interval သည်, AOR = & Odds အချိုးချိန်ညှိ။
aHIV ပိုး status ကို 1 = အပြုသဘောဆောင်သော,0= အနုတ် coded ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ maladaptive သိမြင်ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းကိုပထမဦးဆုံးစကေးကိုဖန်တီးရန်ရှာ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-depth ကိုအရည်အသွေးအင်တာဗျူးများ၏ရလဒ်များ, လိင်များ၏လိုအပ်ချက်ခြီးမှမျးသလိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများ disqualifying နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးနှင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့တရဲ့ Self-ထိရောက်မှုအသေးအဖွဲအပါအဝင် confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကထောက်ခံသုံးခု discrete subscales, အကြံပြုသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဤ subscales များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအပြုအမူ၏ Self-စည်းမျဉ်းထိရောက်မှုမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်း hypersexuality (Bandura, 1982, 1997) ၏သိမြင်မှုမော်ဒယ်အကြံပြုထားသည်။ လိင် subscale ၏ Disqualified အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိသိသာသာ hypersexuality အပေါငျးတို့သတည်ဆဲအယူအဆရေးရာမော်ဒယ်များ၏သော့ variable တွေကိုအဘို့အညှိအပြီးအဆိုပြုထား hypersexuality စံ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တားစီး, Impulse, စိတ်ခံစားမှု dysregulation, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ခန့်မှန်းကြောင်းထို့ပြင်ဆိုတဲ့အချက်ကို ) hypersexuality ၏သိမြင်မှုခန့်မှန်းအပေါ်ဆက်လက်သုတေသနနှင့်လက်တွေ့အာရုံ၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုထားသည်။
တစ်ဦးချင်းလိင်အနည်းငယ်အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့အများကြီးထိခိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်သော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများတွင်ယောက်ျားပြုသကဲ့သို့နေဆဲမကြာခဏကလိုက်ရှာသည်ဟုယုံကြည်လျှင်, မိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့အနိမ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိရောက်မှု၏ယုံကြည်ချက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူသည်မိမိထိန်းချုပ်ကျော်လွန်ပြီးပြင်ပအခြေအနေများအားဖြင့်မဟုတ်, မိမိပြုမူမှုအသုံးပြုပုံမောင်းနှင်အဖြစ်သူ၏အပြုအမူကိုမြင်လာပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း, အိပ်အပန်းဖြေ, ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်, connect, ဒါမှမဟုတ်အာရုံစူးစိုက်-သူမှနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ-ရှိမရှိများအတွက်လိင်လိုအပ်သောကယုံကြည်သည်သည့်အခါထို့ပြင်အကျိုးဆက်မဟုတ်ဘဲမိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိသည်မိမိပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိရောက်မှုထက်ထိုအပြင်ပလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, သူ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြသည်ဟုယုံကြည်ပါလိမ့်မယ် မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်ရှာကြာလော့။ ဤနည်းအားဖြင့် maladaptive ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား (ဆိုလိုသည်မှာအကြိုးခံစားခှငျ့, ဝါကြွားလိုအပ်ချက်များကိုအရည်အချင်းပျက်ယွင်း) အလှည့်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် hypersexuality မောင်းသော (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ခုသူ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်မ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-စည်းမျဉ်းများအတွက်တဦးတည်းရဲ့ထိရောက်မှု၏ maladaptive သဘောထားအမြင်ကိုမောင်း ဒီလေ့လာမှုမှာပြသ။ မကြာသေးမီကဆောင်ရွက် Bandura ရဲ့ (1977) အမူအကျင့် Self-ထိရောက်မှု၏မူလမော်ဒယ် (ဝီလျံ, 2010) ဒီအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမူဘောင် (ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား→ Self-ထိရောက်မှုယုံကြည်ချက်→အပြုအမူ) အတွက်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုကိုဆက်ကပ်။
အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်, ထိုလိင်ယုံကြည်တဲ့အချိန်စွန့်ပစ်, ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးနှင့်မကြိုးစားအားထုတ်မှု hypersexuality အပေါငျးတို့သတည်ဆဲမော်ဒယ်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုများအတွက်ချိန်ညှိနေတဲ့မော်ဒယ်ထဲမှာ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကျိုးနပ်သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်လိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများ disqualifying ယခင်မော်ဒယ်များအတွက် unexplored သွားပြီကြောင်း hypersexuality တစ်မူလတန်းခန့်မှန်းကိုယ်စားပြုဆိုလို။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲ hypersexuality ၏ defining features တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, hypersexuality ၏လက်ရှိမော်ဒယ် (ဒီဒုက္ခဆင်းရဲများ၏အရင်းအမြစ်ကိုသတ်မှတ်ကြဘူးKafka, 2010) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ဒုက္ခဆင်းရဲတဦးအလားအလာအရင်းအမြစ်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုလိင်များ၏ရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. maladaptive ယုံကြည်ချက်, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးရဲ့အရိပ်မိမရှိခြင်းဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လိင်ကနေမှသာအန္တရာယ်သိ၏အထူးသဖြင့်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်မဟုတ်ဘဲအကြိုးရှိ, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်ဦးစလုံးမှ၎င်း၏တစ်ပြိုင်နက်စွမ်းရည်အားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုစေ့စေ့အောက်မေ့ hypersexuality တစ် request ကိုမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီခဲ့သိမြင်မှုဒုက္ခဆင်းရဲ (ဥပမာနောင်တ, အရှက်ကွဲခြင်း) ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်အစေခံရန် ပင်ယာယီသည်မှန်လျှင်, ဒုတိယအထိန်းညှိ, ဒါမှမဟုတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်, ဒီဒုက္ခဆင်းရဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခင်းအကျင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ဥပမာပတျဝနျးကငျြအတှေ့အကွုံအချိန်ကြံ့မော်ဒယ်များလုပ်ကိုင်ကြောင်းအနာဂတ်သုတေသန, Hofmann, Baumeister, Förster, & Vohs, 2012; Shrier, Shih, Hacker, & de Moor, 2007) နောက်ထပ်တစ်ခု antecedent နှင့်လိင်၏နောက်ဆက်တွဲအခွအေနေနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်အစေခံရန် sex အကြောင်း maladaptive သိမြင်ဘို့အလားအလာအပါအဝင်ပြဿနာ hypersexuality ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်, ရှင်းလင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လိင်နှင့်လိင်လူနည်းစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး Maladaptive သိမြင်မှု
ဂေးနဲ့ရိုးရိုးလူတို့သညျဘဝလမျးစဉျကိုဖြတ်ပြီးလိင်ကွဲယောက်ျား (ဥပမာထက်သိသိသာသာပိုပြီးထိုကဲ့သို့သောအနိမ့် Self-တန်ဖိုးရှိနှင့်မျှော်လင့်ချက်မဲ့အဖြစ် maladaptive သိမြင်မှု, အစီရင်ခံရန်များပါတယ်, Hatzenbuehler, 2009; Hatzenbuehler, McLaughlin, & Nolen-Hoeksema, 2008; Safren & G. အ, 1999) ။ ဂေးနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျားအထူးသငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမှ၎င်းတို့၏အချိုးအစားမညီမျှမှုထိတွေ့ပေးထားသောလိင်, သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်န်းကျင်လူနည်းစုဖိအားများနှင့်မကြာခဏ (အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများကြီးဖြတ်ပြီးတစ်ခုထွန်းသစ်စလိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်ရိုးရိုးဝိသေသလက္ခဏာဝန်းရံသောလျှို့ဝှက်, အရှက်ကွဲအကြောင်းကိုပိုမိုသိမြင်ဘက်လိုက်မှုကိုခံစားရစေခြင်းငှါ,D'Augelli, 2002; Lelutiu-Weinberger et al ။ , 2011; Pachankis & Bernstein, 2012; Parsons et al ။ , 2012; et al တင်းကုပ်။ , 2003) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (သိမြင်မှုဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်မွေးမြူရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Briere & Elliott သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်), အလှည့်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှ, စားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကဲ့သို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်စားသုံးမှုအပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အရာ (Sarin & Nolen-Hoeksema, 2010) ။ ထို့ပြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလကိုဖြတ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောတဦးတည်းရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့အဖြစ်, တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတစ်ခု core ကိုရှုထောင့်ပုန်းအောင်း (ခိုးတဦးတည်းရဲ့ Self-အယူအဆနှင့်ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်ပုံဖော်ပြသထားသည်Pachankis & Hatzenbuehler, 2013) ။ တိုက်ရိုက်ကဒီမှာစမ်းသပ်ပြီးမဟုတ်နေစဉ်, ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်အကြောင်းကို maladaptive အတှေးအများ၏အရင်းအမြစ်တည်နေရာတဲ့မော်ဒယ်လူနည်းစုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အခြားကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လေ့လာမှုများအတွက်လိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်တဲ့အတိုင်းအတာ၏ပါဝင်မှုနောက်ထပ်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားရဲ့လိင်၏မော်ဒယ်များနှင့်လူနည်းစုစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများ၏အကျိုးဆက်များအတွက်သိမှတ်ခံစားမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို elucidate နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုချီးမြှင့်အကြိုးခံစားခှငျ့မြား၏အလှူငွေနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာတွေ့ရှိချက်, အားနည်းချက်များအရည်အချင်းပျက်ယွင်းခြင်း, hypersexuality တစ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မော်ဒယ်အတွက် Self-ထိရောက်မှုလျော့ချရှိပြီးသားကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများနှင့်ဤဖြစ်စဉ်ကုသမှုအတွက်လက်တွေ့လမ်းညွှန်မှု (ဥပမာနှင့်ကိုက်ညီခဲ့ကြ သိုးထိန်း 2010; Weiss, 2004) အဖြစ် (ထိုကဲ့သို့သော exhibitionism နှင့် fetishism ကဲ့သို့သောအခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, ကုသမှချဉ်းကပ်Murphy & စာမျက်နှာ, 2008; Wincze, 2000) ။ ဤအကုသများတွင်သိမြင်မှုချဉ်းကပ်မှုအတွက်ပေးထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအလားအလာအကျိုးဆက်များနှင့်တဦးတည်းရဲ့ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့မွေးစား Self-ထိရောက်မှု၏တိကျမှန်ကန်မှုစိစစ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့။ နောက်ထပ်အခြားအပြုအမူပိုလျှံပြဿနာများ (ဥပမာ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း) အတွက်ကုသမှုချဉ်းကပ်မှုမဲ့သွေးဆောင်လှုံ့ဆော်မှု (ဥပမာ construing ကနေအထိသိမြင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနည်းစနစ် employ Hofmann, Deutsch, Lancaster, & Banaji, 2010) သှေးဆောငျမှု (ဥပမာများ၏အလိုအလျှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတူရောက်စွက်ဖက်ရန်, Wiers, Rinck, Kordts, Houben, & Strack, 2010) ။ ဤနည်းပညာများသည်နောက်ဆုံးမှာ, အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုသပ္ပါယ်ပြဿနာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်ချက်နှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှု (Self-ထိရောက်မှုတည်ဆောက်Marlatt & ဂေါ်ဒွန်, 1985) ။ လိင်တူဆက်ဆံသူကိုလူတို့တွင်မကြာသေးမီကအကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံဘို့ Self-မျှတမှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်သည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစံ HIV ပိုးအန္တရာယ်-လျှော့ချရေးအကြံပေးခြင်းကိုလက်ခံရရှိသူတစ်ဦးအုပ်စုသည် (အကြားမရှိ, ပြောင်းလဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလက်ခံသူများအကြားအကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက် 60% လျှော့ချရေးလြှော့Dilley et al ။ , 2007) ။ အခြားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုဆန်းစစ်မြောက်မြားစွာ relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုတဦးတည်းရဲ့ပြဿနာအပြုအမူအကြောင်းကိုသိမြင်မှုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းကြားဝင်, တကယ်တော့, ထိုအပြုအမူအတွက်လျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တည်ထောင်ရန်နိုင်ဘူးသောကြောင့်, လက်တွေ့သက်ရောက်မှုသတိနဲ့ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ maladaptive သိမြင်မှုအတွက်လျှော့ချ hypersexual အပြုအမူအတွက်လျှော့ချအရင်အဦးနေရာမယ်နေချိန်မှာကျနော်တို့ maladaptive သိမြင်မှုပြဿနာအပြုအမူအတိုင်းလိုက်နာဒါမှမဟုတ် unmeasured တတိယ variable ကိုသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုရှင်းပြအံ့သောငှါအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။ သို့တိုင်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုလိင်အကြောင်းကို maladaptive အတှေးအမြင့်မား, လိင်၏အထူးသဖြင့် disqualified အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုပြီးပြဿနာ hypersexuality နှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တကယ်တော့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေပင်ကိုယ်မူလစာမေးပွဲစောင့်ကြိုပေမယ့်အဓိကအချက်တစ်ချက်ကွာခြားမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့် hypersexuality များအတွက်အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာပြတဲ့သူရိုးရိုးယောက်ျားသိမြင်မှုရောက်သောအဆင့်ပြဿနာ hypersexuality နှင့်အတူလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများအားဖြင့်ကြုံတွေ့စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလည်း, လိင်အပေါ်တစ်ဦးကျန်းမာသိမြင်မှုရှုထောင့်မှုများထပ်တလဲလဲနှင့်အတူကိုက်ညီမှုဖြစ်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ကိုက်ညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလိင်ဆီသို့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားတွေသွေးဆောင်ကြောင်းကုသမှုချဉ်းကပ်လိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်တဦးတည်းကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်မသတိလစ်ရှည်ထက်လျှော့ချဖို့, hypersexuality မှအစေခံစေခြင်းငှါ၎င်းယုံကြည်ချက်အားပေးရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုကချဉ်းကပ်ပေမယ့်အများအားဖြင့် circumvent, လက်တွေ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအရေးပါသော nomenclatural ပြဿနာများ၏ရလဒ်များကို။ အထူးသ, တစ်ဦးစံအဖြေရှာတဲ့ nomenclature နှင့်သုတေသနအစီအစဉ်အတွက်ပြဿနာ hypersexuality ၏ reification လူ့အသက်ကိုတစ်ကျန်းမာရှုထောင့် pathologize မှစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။ ဤဆင်ခြေ (လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား, အဘယ်သူ၏လိင် variable ခေတ်သစ်သမိုင်းတစ်လျှောက် pathologized ထားပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုတစု, ယနေ့ဆက်လက်သောလူမှုရေးပြဿနာအဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်လူထုဆန္ဒ, 2012) ။ မသက်ဆိုင်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ်လူမှုရေးတန်ဖိုးနှင့်ဆန့်ကျင်မဆိုအငြင်းအခုံ၏, သို့သော်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းကိုအလွန်အမင်းတင်းကျပ်သို့မဟုတ်တိအတှေး၏ရှေ့မှောက်တွင်, သူ့ဟာသူနှင့်တစ်ဦးလက်တွေ့ပြဿနာကိုကိုယ်စားပြုပြဿနာ hypersexuality ၏အလားအလာပင် pathognomonic လက္ခဏာ စိတ်ကူးယဉ်, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူ။ ရလဒ်အဖြစ် maladaptive အတွေးအကြောင်းအရာနှင့်တရားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အယူအဆရေးရာမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. လိင်အကြောင်းကိုဆက်စပ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်ကုသမှုမသက်ဆိုင်တိကျတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု key ကိုစိတ်ကျန်းမာရေးဦးစားပေးကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကပြဿနာ hypersexuality တွေ့ကြုံခံစားသူကိုလူတို့ကြုံတွေ့နေရသောသိမြင်မှုဒုက္ခဆင်းရဲလျှော့ချထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအဆင့်ဆင့်လျှော့ချ, သူ့ဟာသူပြဿနာ hypersexuality လျော့ချစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
ဤလေ့လာမှု၏နှစ်ဦးကိုမှတ်သားလောက်န့်အသတ်သည့်နမူနာချဉ်းကပ်မှုနှင့် Cross-Section ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနမူနာစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒီလူအပေါငျးတို့သနယူးယောက်မြို့မြို့ပြဧရိယာတှငျနထေိုငျ, အင်တာနက် access ကိုရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်မြင့်မားသောပညာတတ်ကြ၏။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွနေသော Non-မြို့ပြ၏နမူနာသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း-ပညာတတ်ယောက်ျား hypersexuality နှင့်အတူအလားအလာကွဲပြားခြားနားသောအသင်းအဖွဲ့များကိုထင်ရှားစွာပြကြောင်း maladaptive သိမြင်မှု၏ကွဲပြား profile များကိုထိန်းသိမ်းရန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ တစ်ဦးကပိုကြီးနမူနာ, ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ multivariable Logistic မော်ဒယ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်း detect လုပ်ဖို့ကိုပိုပြီးပါဝါလြှော့ကြလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ Cross-Section ချဉ်းကပ်နည်းလိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်အကြောင်းမရှိတစ်ခုရလဒ်ကို, နှစ်ဦးစလုံး, ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာ hypersexuality မခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထား။ ပြဿနာ hypersexuality ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်မှု၏ယာယီအခန်းကဏ္ဍဖော်ထုတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများပေးမယ်လို့ရှေ့တော်၌ဝေဖန်ကာလအတွင်းအလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားအောက်ပါအတိုင်းသော longitudinal ဒီဇိုင်း။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤအသင်းအဖွဲ့များအချင်းချင်းတုံ့ပြန်ချက်ထဲမှာလည်ပတ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြပြီးအနာဂတ်အလုပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Co-ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများကို, maladaptive သိမြင်မှုနှင့် hypersexuality စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းဒီဇိုင်းများအသုံးချသင့်ပါတယ်။ ထို့ပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမီနှင့်အပြီးသိမြင်မှု၏ဂေဟစနစ်ဒင်္နမူနာလိင်နှင့်လိင်အပြုအမူအပေါ်၎င်းတို့၏ယာယီသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ maladaptive သိမြင်မှုအတွက်အတက်အကျများ၏မှတ်ပုံတင်ဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းဂေါပကဘုတ်အဖွဲ့တရားဝင်ရောဂါအဖြစ်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်၏အပိုင်းအတွက်ဖြစ်စေ Hypersexual Disorder အပါအဝင်ဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသုတေသနပြဿနာ hypersexuality အဖြစ်တူရိယာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့လိုအပျသညျ, Inventory ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းရလဒ်ကိုအတိုင်းအတာပြသည့် Hypersexual Disorder ကြောင့်အကဲဖြတ်ရန်အဆိုပြုထား။ လက်ရှိငါတို့သည်စကေး၏ Self-အစီရင်ခံစာဗားရှင်းထက်တစ်ဦးဆရာအုပ်ချုပ်ခွင့်စကေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာဆန်းစစ်။ ဒါဟာအကဲဖြတ်၏မတူညီသော Modes သာအဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ hypersexuality ခွဲခြားဖို့စကေးရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ ပြဿနာ hypersexuality မှအရှိဆုံးတိကျတိုင်းတာခြင်းချဉ်းကပ်မြဲမြံစေခြင်းငှါရှာကြံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေခိုင်လုံသောအဖြေရှာတဲ့ taxon အဖြစ် hypersexuality တည်ထောင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
ဒီလေ့လာမှုကပြဿနာ hypersexuality ရှင်းပြအတွက်လိင်အကြောင်းကို maladaptive သိမြင်မှု၏အရေးပါမှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံထည့်သွင်းရန် hypersexuality ၏ယခင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နှင့်တိုးချဲ့တည်ဆဲအယူအဆရေးရာမော်ဒယ်များထက် hypersexuality တစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ လိင်နှင့် ပတ်သက်. maladaptive သိမြင်မှုတစ်ခုသုံး-Factor ဖွဲ့စည်းပုံ၏မှတ်ပုံတင် maladaptive ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် hypersexuality ရှင်းပြအားလုံးသုံးရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-စည်းမျဉ်းမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်, ရှင်းပြထားတဲ့မှတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်အကြံပြုထားသည်။ hypersexuality ၏ထူထောင်ခန့်မှန်းအတူအဆိုပါ confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပါအဝင်ကျယ်ပြန် psychometric ဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ဒီ model ၏ဖော်ထုတ်ခြင်း, အခြေခံအဆောက်အဦးညီမျှခြင်းမော်ဒယ်နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းဒီဆောက်လုပ်ရေး၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုအကြံပြုထားသည်။ လိင်၏အကျိုးကျေးဇူးများ disqualifying နှင့် ပတ်သက်. maladaptive သိမြင်မှုအားဖြင့်လျှော့ချဖို့ထိုကဲ့သို့သောအတှေးလျှော့ချဖို့အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်အနာဂတ်သုတေသနနှင့်လက်တွေ့ချဉ်းကပ်ဘို့အ hypersexuality ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများယခင်ကထူထောင်မော်ဒယ်များ၏သော့ချက် variable တွေကိုအထက်ရိုးရိုးယောက်ျားကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာကိုဖြတ်ပြီး hypersexuality ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကရှင်းပြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲမှုများထပ်တလဲလဲ, တိုကျတှနျးထားသနှင့်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ။
ဤစီမံကိန်းစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (; ဂျက်ဖရီတီ Parsons, ကျောင်းအုပ်ကြီးသုတေသန R01-MH087714) မှသုတေသနထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်။ အိပ်ချ် Jonathon Rendina စိတ်ကျန်းမာရေးရုသသည်အယ်လ် Kirchstein တစ်ဦးချင်း Predoctoral Fellowship (F31-MH095622) ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုသာစာရေးသူ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သေချာပေါက်ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ၏တရားဝင်အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ ရုဗင် Jimenez, ယောရှု Guthals နှင့်ဘရိုင်ယန် Mustanski: အဆိုပါစာရေးဆရာခေါင်းအုံး Talk ကိုသုတေသနအဖွဲ့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဝန်ခံချင်ပါတယ်။ ခရစ် Cruz, Fran Ferayorni, Sitaji Gurung, နဲ့ Chris Hietikko အဖြစ်သုတေသနလက်ထောက်, ်ထမ်းခေါ်ယူမှု, နှင့်နိုင်ငံတကာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း: ငါတို့သည်လည်း CHEST ကစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကစားသူကိုဝန်ထမ်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့က Chris ရိုင်ယန်, ဒံယေလ Nardicio နှင့် Stephan ဒယ်လ်ဆန်သည်နှင့်ဤလေ့လာမှုအဘို့မိမိတို့အချိန်ဆန္ဒအလျောက်သူသင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးရဲ့။ DSM-5 လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders အပေါ် Workgroup ။ Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory ။ မှရယူရန် 2010 http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=415#.
Amtmann: D, Bamer လေး, ကွတ် KF, Askew RL, လမ်းပြ Noonan VK, Brockway ဂျေအေ။ ဝါရှင်တန်ကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုအတိုင်းအတာတက္ကသိုလ်: မသန်စွမ်းလူများအတွက်အသစ် Self-ထိရောက်မှုစကေး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏မော်ကွန်း။ 2012;93: 1757-1765 ။ Doi: 10.1016 / j.apmr.2012.05.001 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Amtmann: D, ကွတ် KF, Jensen အမတ်, ချန် WH, Choi က S, Revicki D ကိုတစ်ဦး PROMIS ကို item ဘဏ်များ၏ Callahan အယ်လ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာကျင်မှု်ရောက်စွက်ဖက်ကိုတိုင်းရန်။ နာကျင်မှု။ 2010;150: 173-182 ။ Doi: 10.1016 / j.pain.2010.04.025 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Bancroft J ကို, ဂရေဟမ်, CA, Janssen အီး, Sanders လုပ် SA ။ အဆိုပါ dual-ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ်: လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2009;46: 121-142 ။ Doi: 10.1080 / 00224490902747222 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Bancroft J ကို, Janssen အီးအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ dual-ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒယ်: ဗဟိုကမကထပြုခဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှတစ်ဦးကသီအိုရီချဉ်းကပ်နည်း။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24:571–579. doi: 10.1016/S0149-7634(00)00024-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Bancroft J ကို, Vukadinovic Z. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2004;41: 225-234 ။ Doi: 10.1080 / 00224490409552230 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Bandura အေကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှု: အပြုအမူပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစညျးလုံးသီအိုရီခါနီး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1977;84: 191-215 ။ Doi: 10.1037 / 0033-295X.84.2.191 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Baum MD, Fishman JM ။ AIDS ရောဂါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေ: တစ်စုကုသမှုချဉ်းကပ်။ ခုနှစ်တွင်: ဝဲလ်လုပ် SA, Burnham RA, Forstein M က, အယ်ဒီတာများ။ AIDS ရောဂါများ၏အသက်အရွယ်အတွက်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေနှင့်အတူ Psychotherapy: ရှေ့တန်းပေါ်ကုသ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း; 1994 ။ စစ။ 255-274 ။ [Google Scholar]
Beck ကို AT, Rush AJ, Shaw က BF, Emery G. အ စိတ်ကျရောဂါ၏သိမှုကုထုံး။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း; 1987 ။ [Google Scholar]
Bentler pm တွင်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမော်ဒယ်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1990;107: 238-246 ။ Doi: 10.1037 / 0033-2909.107.2.238 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဆူးပင် J ကို, Elliott သည် DM ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Self-အစီရင်ခံကလေးဘဝရုပ်ပိုင်းနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတစ်ဦးယေဘုယျလူဦးရေနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ sequelae ။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုနှင့်လျစ်လျူရှုမှု။ 2003;27: 1205-1222 ။ Doi: 10.1016 / j.chiabu.2003.09.008 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Carnes P. အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ။ Minneapolis, MN: CompCare ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း; 1983 ။ [Google Scholar]
Clark က DM, လူမှုရေး phobia ၏ဝဲလ်အေတစ်ဦးကသိမြင်မှုပုံစံ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1995;56: 251-260 ။ [Google Scholar]
Coleman အီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ။ ဓာတုမှီခိုမှုအကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1987;1:189–204. doi: 10.1300/J034v01n01_11. [CrossRef] [Google Scholar]
Coleman အီး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖော်ပြများအတွက် obsessive-compulsive မော်ဒယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurology ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1990;2: 9-14 ။ [Google Scholar]
D'Augelli AR ။ စိတ်ကျန်းမာရေးလိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူအကြားပြဿနာများနှင့်ရိုးရိုးလူငယ်များသည်အသက်အရွယ်မရွေး 14 မှ 21 ။ လက်တွေ့ကလေးသူငယ်စိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;7: 433-456 ။ Doi: 10.1177 / 1359104502007003010 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Derogatis LR ။ အကျဉ်းချုပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ Inventory ။ Baltimore: လက်တွေ့ Psychometric သုတေသန; 1975 ။ [Google Scholar]
Dilley JW, ဝုဒ် WJ, Loeb, L, နယ်လ်ဆင် K ကို Sheon N ကို, Mullan J ကို, McFarland ဒဗလျူလိင်တူဆက်ဆံသူကိုလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်လျှော့ချဖို့ခ်ျအိုင်ဗွီစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူအကျဉ်းချုပ်သိမြင်အကြံပေးခြင်း: paraprofessional တိုင်ပင်မှူးမတ်သုံးပြီး randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမှရလဒ်များ။ အေအိုင်ဒီအက်စ်၏ဂျာနယ်။ 2007;44: 569-577 ။ Doi: 10.1097 / QAI.0b013e318033ffbd ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Dodge B, Reece M က, Herbenick: D, Fisher ကနေ C, Satinsky S က, Stupiansky N. ဆက်ဆံရေးလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်ရောဂါနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူကိုယောက်ျားတစ်ဦးလူထုအခြေပြုနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြား။ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါပိုးမကူးစက်။ 2008;84: 324-327 ။ Doi: 10.1136 / sti.2007.028696 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ပထမဦးဆုံးအကို MB, Spitzer RL, မျောက်လွှဲကျော်က M, Williams က JB ။ DSM-IV-TR Aaxis ငါ Disorders များအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး, psychotic မျက်နှာပြင် (SCID-I / PW / PSY ကမျက်နှာပြင်) နဲ့သုတေသနဗားရှင်းလူနာထုတ်ဝေ biometric သုတေသန, နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute က; 2002 ။ [Google Scholar]
Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR စနစ်။ mini-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်: အဆရာများအတွက်လူနာများ၏သိမြင်ပြည်နယ်ဂမ်များအတွက်တစ်ဦးကလက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်း။ စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ်။ 1975;12: 189-198 ။ [PubMed] [Google Scholar]
လူထုဆန္ဒ။ 2001-2012 (ဇယား): လိင်တူချစ်သူ / လိင်တူချစ်သူဆက်ဆံရေးကငျြ့တရား 2012 http://www.gallup.com/poll/154634/Acceptance-Gay-Lesbian-Relations-New-Normal.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=syndication&utm_content=morelink&utm_term=Politics%20-%20Social%20Issues.
ရွှေ SN, Heffner CL ။ လိင်စွဲ: အတော်များများအယူအဆအနည်းငယ်မျှသာဒေတာ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1998;18: 367-381 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Goodman အေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ: Diagnosis, etiology နှင့်ဆက်ဆံမှု။ ခုနှစ်တွင်: Lowenstein JH, Millman RB, Ruiz P ကို, အယ်ဒီတာများ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု: တစ်ဦးကပြည့်စုံကျောင်းစာအုပ်။ 3. Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 1997 စစ။ 340-354 ။ [Google Scholar]
Gratz KL, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် dysregulation ၏ Roemer အယ်လ် Multidimensional အကဲဖြတ်: ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, အချက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေစကေးအတွက်အခက်အခဲများ၏ကနဦးအတည်ပြု။ Psychopathology နှင့်အပြုအမူအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်။ 2004;26:41–54. doi: 10.1007/s10862-008-9102-4. [CrossRef] [Google Scholar]
Grov ကို C, Parsons JT, Bimbi DS ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2010;39:940–949. doi: 10.1007/s10508-009-9483-9. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Hatzenbuehler ML ။ ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအမည်းစက် "အရေပြားအောက်မှာအရ" ပါသလဲ? တစ်ဦးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစေ့စပ်ဖြန်ဖြေမူဘောင်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 2009;135: 707-730 ။ Doi: 10.1037 / a0016441 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Hatzenbuehler ML, McLaughlin Ka, Nolen-Hoeksema အက်စ် Emotion စည်းမျဉ်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုများနှင့်လိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက်တစ် longitudinal လေ့လာမှုမှာရောဂါလက္ခဏာတွေ internalizing ။ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2008;49:1270–1278. doi: 10.1111/j.1469-7610.2008.01924.x. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Hofmann W က, Baumeister RF, Förster, G, Vohs KD ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသွေးဆောင်: အလိုဆန္ဒ, ပဋိပက္ခနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကအတွေ့အကြုံကိုနမူနာလေ့လာမှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2012;102: 1318-1335 ။ Doi: 10.1037 / a0026545 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Hofmann W က, Deutsch R ကို, Lancaster K ကို Banaji MR ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သွေးဆောင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အလိုအလျှောက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း: အသွေးဆောင်မှု၏အပူအအေး။ လူမှုစိတ်ပညာ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2010;40: 17-25 ။ Doi: 10.1002 / ejsp.708 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
ချိတ်ဖြစ်မှု, ချိတ် JP, Davis က DE, Worthington EL, Penberthy JK ။ တူရိယာတစ်ခုအရေးပါပြန်လည်သုံးသပ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် compulsive တိုင်းတာခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 2010;36: 227-260 ။ Doi: 10.1080 / 00926231003719673 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
ဟူ L ကို, Bentler pm တွင်။ အသစ်ကအခြားရွေးချယ်စရာနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ: covariance ဖွဲ့စည်းပုံမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌လျောက်ပတ်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း: တစ်ဦးက Multidisciplinary ဂျာနယ်။ 1999;6: 1-55 ။ Doi: 10.1080 / 10705519909540118 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Joormann J ကို, dysphoria နှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် Siemer အမ်ကိုထိခိုက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း: သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သိမှုဘက်လိုက်မှုနှင့်လိုငွေပြမှု။ လူမှုရေးနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာ Compass ။ 2011;5: 13-28 ။ Doi: 10.1111 / j.1751-9004.2010.00335.x ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Kafka အမတ်။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2010;39:377–400. doi: 10.1007/s10508-009-9574-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kafka အမတ်, ယောက်ျားအတွက် nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲနှင့် paraphilias ၏ Prentky R. Fluoxetine ကုသမှု။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1992;53: 351-358 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Kalichman SC, Adair V ကို, Rompa: D, Multhauf K ကိုဂျွန်ဆင် J ကို, ကယ်လီဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ-ရှာ: စကေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူတက်ကြွလူတို့တွင်ခန့်မှန်း AIDS ရောဂါအန္တရာယ်အပြုအမူ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်။ 1994;62: 385-387 ။ Doi: 10.1207 / s15327752jpa6203_1 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
သက်တမ်းနှင့် HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူခန့်မှန်း: Kalichman SC, compulsive ရှာကြံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Rompa ဃလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ scales ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်။ 1995;65: 586-601 ။ Doi: 10.1207 / s15327752jpa6503_16 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kalichman SC, Rompa ဃအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး: နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် HIV ပိုးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူသုံးပါ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်။ 2001;76: 379-395 ။ Doi: 10.1207 / S15327752JPA7603_02 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Kingston DA, Firestone P. ပြဿနာ hypersexuality: စိတ်ကူးနှင့်ရောဂါ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2008;15: 284-310 ။ Doi: 10.1080 / 10720160802289249 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Kline RB ။ အခြေခံမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်များ၏အလေ့အကျင့်။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း; 2010 ။ [Google Scholar]
Kohn CS ။ သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြု. kleptomania အပြုအမူတွေ၏စိတ်ကူးနှင့်ကုသမှု။ အပြုအမူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ကုထုံး၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2006;2: 105-111 ။ [Google Scholar]
Lelutiu-Weinberger ကို C, Pachankis je, Golub လုပ် SA, Walker က JNJ, Bamonte AJ, Parsons JT ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူလိင်တူချစ်သူ-related အမည်းစက်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်များ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အသက်အရွယ်ဆောင်များတွင်ကွဲပြားခြားနားမှု။ AIDS နှင့်အပြုအမူ။ 2011:1–10. doi: 10.1007/s10461-011-0070-4. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Logue AW ။ Self-ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သုတေသန: တစ်ခုပေါင်းစပ်မူဘောင်။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1988;11: 665-679 ။ Doi: 10.1017 / S0140525X00053978 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Marlatt GA, ဂေါ်ဒွန် JR, အယ်ဒီတာများ။ Relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး: စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများ၏ကုသမှုကို Maintenance မဟာဗျူဟာများ။ နယူးယောက်: Guilford; 1985 ။ [Google Scholar]
Mischel W က, နှောင့်နှေးအပြုအမူအတွက် Baker N. သိမှုစိစစ်ရေးနှင့်အသွင်ပြောင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1975;31: 254 ။ Doi: 10.1037 / h0076272 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Missildine W က, Feldstein, G, Punzalan JC, Parsons JT ။ S / သူငါ့ကိုခစျြ့ / သူငါ့ကိုမချစ်သောသူ: ကျား, မကွဲပြားမှုနဲ့ရင်ခုန်စရာဆွဲဆောင်မှု၏ heterosexist ယူဆချက်မေးမြန်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2005;12: 1-11 ။ Doi: 10.1080 / 10720160590933662 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Muench က F, Parsons JT ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့် HIV: သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဆက်ဆံမှု။ အာရုံစူးစိုက်: AIDS ရောဂါသုတေသနနှင့်တိုင်ပင်ရန်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်။ 2004;19: 1-5 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Murphy က WD, စာမျက်နှာ IJ ။ Exhibitionism: အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံမှု။ ခုနှစ်တွင်: ဥပဒေ DR, O'Donohue WT, အယ်ဒီတာများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance: သီအိုရီ, အကဲဖြတ်များနှင့်ဆက်ဆံမှု။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း; 2008 ။ စစ။ 61-75 ။ [Google Scholar]
Pachankis je, Bernstein LB. အစောပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှု မှစ. အများပြည်သူ Self-ဝိညာဏ်မှ: ငယ်ရွယ်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခု etiological မော်ဒယ်။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ။ 2012;13: 107-122 ။ Doi: 10.1037 / a0024594 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Pachankis je, Hatzenbuehler ML ။ အယူအဆ "လောကအတွက်အကောင်းဆုံး Little က Boy" ဟုအဆိုပါ၏ပင်ကိုယ်မူလစမ်းသပ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုငယ်ရွယ်လူတို့တွင်ဆက်ပြောပါတယ် Self-တန်ဖိုးရှိများ၏လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး။ အခြေခံပညာနှင့်အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ။ 2013;35: 176-190 ။ [Google Scholar]
Parsons JT, Bimbi DS, Halkitis PN ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိကြော်ငြာသူကိုရိုးရိုး / လိင်တူချစ်သူအထီးစောင့်အရှောက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2001;8: 101-112 ။ Doi: 10.1080 / 10720160127562 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Parsons JT, Grov ကို C, Golub လုပ် SA ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, Co-ဖြစ်ပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများ, နှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင် HIV ပိုးအန္တရာယ်: တစ် syndemic ၏နောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2012;102: 156-162 ။ Doi: 10.2105 / AJPH.2011.300284 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Parsons JT, ကယ်လီဘီစီ, Bimbi DS, DiMaria L ကို, Wainberg ML, Morgenstern ဂျေလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ဇစ်မြစ်များအတွက်ူးပ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2008;37:817–826. doi: 10.1007/s10508-007-9218-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Parsons JT, Rendina HJ, Ventuneac တစ်ဦးက, ကွတ် KF, Grov ကို C, အလွန်အမင်းလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင် Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory ၏ Mustanski ခတစ်ဦးက Psychometric စုံစမ်းစစ်ဆေး: ပစ္စည်းတုံ့ပြန်မှုသီအိုရီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်။ 2013;10: 3088-3101 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12117 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Patton JH စတန်းဖို့ဒ်က MS, Barratt ES ။ အဆိုပါ Barratt Impulse စကေး၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1995;51:768–774. doi: 10.1002/1097-4679(199511)51:6<768::AID-JCLP2270510607>3.0.CO;2-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
အငြင်းပွားမှုနှင့်ကုသမှု: လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေအတွက် Pincu အယ်လ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ။ အကြံပေးခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂျာနယ်။ 1989;68: 63-66 ။ Doi: 10.1002 / j.1556-6676.1989.tb02495.x ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Purcell DW, ပက် JD, Spike PS, Wolitski RJ, တင်းကုပ် R ကို, Valdiserri ro ။ လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူကြုံတွေ့ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု: သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်အားကူညီနိုင်ရန်ညီမျှမှုနှင့်ကြားဝင်နားလည်ခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Wolitski RJ, တင်းကုပ် R ကို, Valdiserri ro, အယ်ဒီတာများ။ မတူညီသောအခွင့်အလမ်း: ကနျြးမာရေးညီမျှမှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားထိခိုက်။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, Inc မှ, 2007 ။ စစ။ 72-96 ။ [Google Scholar]
ရေမွန် NC, Coleman, E, Miner MH ။ စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;44:370–380. doi: 10.1016/S0010-440X(03)00110-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Reis SP, Haviland MG ။ item တုံ့ပြန်မှုသီအိုရီများနှင့်လက်တွေ့ပြောင်းလဲမှု၏တိုင်းတာခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်။ 2005;84: 228-238 ။ Doi: 10.1207 / s15327752jpa8403_02 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Safren လုပ် SA, GHR စီးပွားပျက်ကပ်, မျှော်လင့်ချက်မဲ့, Suicide နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုများနှင့်လိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆက်စပ်အချက်များ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1999;67: 859-866 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Sarin S က, Nolen-Hoeksema အက်စ်ကျိန်းဝပ်၏အန္တရာယ်များ: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများစွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအတွက်မွေးမြူရေးနှင့်စားသုံးမှုဖြေရှင်းကြားဆက်ဆံရေး၏စာမေးပွဲ။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion ။ 2010;24: 71-85 ။ Doi: 10.1080 / 02699930802563668 ။ [CrossRef] [Google Scholar]
Schwartz လုပ် SA, Abramowitz JS ။ nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲ obsessive-compulsive ရောဂါတစ်မူကွဲဖြစ်ပါသလား တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ သိမှုနှင့်အပြုအမူအလေ့အကျင့်။ 2003;10:372–377. doi: 10.1016/S1077-7229(03)80054-8. [CrossRef] [Google Scholar]
ရှပ် L ကို, ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းတစ်သိမြင်-အပြုအမူသီအိုရီဆီသို့ Tarrier N. ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 1993;162: 407-412 ။ Doi: 10.1192 / bjp.162.3.407 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
လိင်စွဲလမ်းအပြုအမူများအတွက်သိုးထိန်းအအယ်လ်သိမှုအပြုအမူကုထုံး။ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး။ 2010;9: 18-27 ။ [Google Scholar]
Shrier LA က, Shih MC, Hacker က L ကို, က de Moore C. မြီးကောင်ပေါက်အတွက် coital ဖြစ်ရပ်များတွင်အောက်ပါဘေးဒဏ်သင့်အတှေ့အကွုံတစ်ဦးကခဏနမူနာလေ့လာမှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2007;40:357.e351–357e358. doi: 10.1016/j.jadohealth.2006.10.014. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Smith ကတစ်ဦး, မိုင်, ငါ Finlayson T က, Oster တစ်ဦးကရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အ DiNenno အီးစင်တာများ။ ရောဂါနှင့်သေဆုံးမှုအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာ။ Vol ။ 59. Atlanta, GA: ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနများ၊ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအမျိုးသားများအကြားအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုကိုအသိမှတ်ပြုခြင်း - ၂၁ မြို့ကြီးများ၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ၂၀၀၈ ။ စစ။ 2010-21 ။ [PubMed] [Google Scholar]
Sobell ကို MB, Sobell LC ။ ပြဿနာသောက်: ပဲ့ထိန်း Self-ပြောင်းလဲမှုကုသမှု။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း; 1992 ။ [Google Scholar]
တင်းကုပ် R ကို, Mills က TC, Williamson J ကို, ဟတ် T က, Greenwood, G, ပေါလုသည်ဂျေ, Catania ဂျေအေ။ Co-ဖြစ်ပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့လိင်တူဆက်ဆံသူကိုမြို့ပြလူတို့တွင် HIV / AIDS ရောဂါတိုးမြှင်အားနည်းချက်များ၏အစည်းအရုံး။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003;93: 939-942 ။ Doi: 10.2105 / AJPH.93.6.939 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
R ကိုပေါလုသည် JP, Greenwood, G, Pollack LM, ပိန်အီး, Crosby သည် GM က, Catania ဂျေအေတင်းကုပ်။ လိင်တူဆက်ဆံသူကိုလူတို့တွင်အရက်သုံးစွဲခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အရက်-related ပြဿနာများကို: မြို့ပြအမျိုးသားများရဲ့ကနျြးမာရေးလေ့လာပါ။ စွဲလမ်း။ 2002;96: 1589-1601 ။ Doi: 10.1046 / j.1360-0443.2001.961115896.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
လိင်စွဲကုသခြင်း Weiss R. ။ ခုနှစ်တွင်: Coombs RH အ, အယ်ဒီတာ။ စွဲလမ်းမမှန်၏လက်စွဲစာအုပ်: ရောဂါနှင့်ကုသမှုမှတစ်ဦးကလက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန်။ နယူးယောက်: ယော Wiley; 2004 ။ စစ။ 233-274 ။ [Google Scholar]
ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါရေတွင်းများအေတစ်ဦးကသိမြင်မှုပုံစံ။ အပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံ။ 1999;23: 526-555 ။ Doi: 10.1177 / 0145445599234002 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
အနောက်စင်ကာပူဒေါ်လာ, Finch JF, Curran PJ ။ ပြဿနာများနှင့်ကုစား: nonnormal variable တွေကိုနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Hoyle RH အ, အယ်ဒီတာ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: Concepts, ကိစ္စများနှင့် applications များ။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage; 1995 ။ စစ။ 56-75 ။ [Google Scholar]
Wiers RW, Rinck M က, Kordts R ကို, Houben K ကို Strack အက်ဖ်ပြန်လေ့ကျင့်အော်တိုအရေးယူ-သဘောထားတွေအန္တရာယ်ရှိသောသောက်အတွက်အရက်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့။ စွဲလမ်း။ 2010;105: 279-287 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2009.02775.x ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Williams က DM ။ ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းခြင်းနှင့် Self-ထိရောက်မှု: တစ်ခုမဖြေရှင်းနိုင်ဆန့်ကျင်၏သီအိုရီသက်ရောက်မှု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2010;14: 417-425 ။ Doi: 10.1177 / 1088868310368802 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Wincze JP ။ atypical လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံမှု။ ခုနှစ်တွင်: Leiblum SR, ရို RC, အယ်ဒီတာများ။ လိင်ကုထုံး၏အခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်။2။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း; 2000 ။ စစ။ 449-470 ။ [Google Scholar]
Witkiewitz K ကို Marlatt GA ။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများအတွက် Relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး: ဇင်ခဲ့ကြောင်း, ဒီ Tao ကဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်။ 2004;59: 224 ။ Doi: 10.1037 / 0003-066X.59.4.224 ။ [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]